January 2018 - ဗေဒင်ဝါသနာအိုး
တက္ကသိုလ် စိုးမိုးနိုင် ဟောတဲ့ တစ်ပတ်စာ ( ၂၉-၁-၂၀၁၈ မှ ၄-၂-၂၀၁၈ )
( ၂၉-၁-၂၀၁၈ မှ ၄-၂-၂၀၁၈ )
ဇန်န၀ါရီလ ၃၁ ရက်နေ့မှ ဖေဖော်ဝါရီလ ၆ ရက်နေ့အထိ
ကံ၊ ဥာဏ်၊ ၀ီရိယ သုံးချက်လုံး အားကောင်းအောင် ကြိုးပမ်းတော်မူနိုင်ကြပါစေသော် ….
တစ်ပတ်အတွင်း ချိန်ဆရန် သင်၏ကံ (၂၀၁၈ ဇန်နဝါရီ ၂၉ မှ ဖေဖော်ဝါရီ ၄ )
ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ အဘက်ဘက်က ကြည်နူးဝမ်းသာစရာတွေကြုံလာမယ်။ ရည်ရွယ်ချက်ကြီးတွေ အောင်မြင်မယ်။ နာမည်ဂုဏ်သတင်း တိုးတက်မယ်။ ရပ်ဝေးအဆက်အသွယ်ကောင်းတွေ ရတတ်တယ်။ ဝမ်းသာစရာတွေ၊ ဧည့်သည်တွေတွေလည်း ရောက်လာမယ်။ အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေ ဝင်လာမယ်။ အဝေးရောက် မိတ်ဆွေ၊ မောင်နှမတွေနဲ့ ပြန်လည်ဆုံဆည်းရတတ်တယ်။ အဆောက်အဦကိစ္စ၊ နေရာထိုင်ခင်းကိစ္စတွေမှာ စိတ်တိုင်းကျအောင်မြင်မယ်။ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးမှာလည်း စိတ်ချမ်းသာရမယ်။ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ခရီးတွေ သွားရမယ်။ လူကြီးသူမ၊ ဆရာသမားတွေရဲ့ အကူအညီကောင်းရမယ်။ ပညာရေးကိစ္စ၊ သင်တန်းကိစ္စ စိတ်ချမ်းသာရမယ်။ အလုပ်ကိစ္စ သတင်းကောင်းကြားမယ်။ ခရီးအကျိုးပေးမယ်။ ငွေအတော်များများ ဝင်လာလိမ့်မယ်။ ထီပေါက်သလို ဝင်တတ်တယ်။ အောက်လက်ငယ်သား ဒုက္ခပေးတတ်တယ်။ သူတစ်ပါးရဲ့အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးမှာ ကြားညပ်တတ်တယ်။ ရောဂါနှစ်မျိုး တစ်ပြိုင်နက်ဖြစ်တာ၊ ဒါမှမဟုတ် မိသားစုထဲမှလူနှစ်ယောက် ကျန်းမာရေးညံ့တာ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရပ်ခြားခရီး စီစဉ်နေသူတွေ အဆင်ပြေအောင်မြင်မယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၆/၃။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် ပညာရေးဆိုင်ရာ ကုသိုလ်ပြုလုပ်ပါလေ။
ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ စိတ်တအားညစ်ရမယ်။ ဘာပဲလုပ်လုပ် အထစ်အငေါ့၊ အနှောက်အယှက်ရှိနေမယ်။ မိတ်ဆွေရင်းတွေ၊ ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေအတွက် စိတ်ညစ်ရတတ်ပါတယ်။ မြစ်နား၊ ချောင်းနား၊ ကန်နားကလူတွေ ဒုက္ခပေးတတ်ပါတယ်။ တိရစ္ဆာန်ကြောင့်စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်။ မီး၊ လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကြုံတာ မတော်တဆ ထိခိုက်မိတာတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ အဆောက်အဦကိစ္စ၊ နေရာကိစ္စတွေ အခက်အခဲ ကြီးကြီးမားမား ကြုံပြီးတဲ့နောက် အဆင်ပြေသွားမယ်။ ကျန်းမာရေး ဆိုးဆိုးရွားရွားမဟုတ်ပေမဲ့ တရှောင်ရှောင်ဖြစ်နေမယ်။ အလုပ်မှာ အတိုက်အခံ၊ အနှောက်အယှက် ကြီးကြီးမားမားကြုံမယ်။ ဒါပေမဲ့ အောင်မြင်သွားမယ်။ ငွေရေးကြေးရေးကတော့ အတော့်ကို ကြပ်တည်းမယ့်အချိန်ပါပဲ။ ကျဉ်းထဲ၊ ကြပ်ထဲအခြေအနေတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ တန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းတွေတော့ ဝင်လာလိမ့်မယ်။ ထွက်နေတဲ့ငွေတွေ၊ ပစ္စည်းတွေလည်း ပြန်ဝင်လာတတ်ပါတယ်။ အောက်လက်ငယ်သားရဲ့ သတင်းကောင်းကြားမယ်။ ဆွေမျိုးသားချင်းထဲက ထီဆုကြီးပေါက်တာ၊ ဆုထူး၊ ဂုဏ်ထူးရတာ၊ ရာထူးတက်တာတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးမှာတော့ ကောင်းသောအပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ အဆက်အသွယ်ပြတ်နေသူတွေ အဆက်အသွယ်ကောင်းရလိမ့်မယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၇/၈။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် နွမ်းပါးသူများကို ဆီးယို ဒါနပြုပါလေ။
ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ လုပ်သမျှ၊ ကြံသမျှ ထစ်ငေါ့ကြန့်ကြာပြီးမှ ထူးထူးခြားခြား အောင်မြင်မှုကြီးတွေ ရတတ်ပါတယ်။ အပင်ပမ်းခံပြီး အကျိုးထူးခံစားရမယ့် ကာလမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ နာမည်ဂုဏ်သတင်း တိုးတက်မယ်။ ငွေအဝင်ကြမ်း အထွက်ကြမ်းဖြစ်နေမယ်။ ထီကိန်း ထီကံကောင်းတဲ့ကာလပါပဲ။ မိတ်ဆွေ၊ မောင်နှမတို့ရဲ့ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေး ရှုပ်ထွေးလိမ့်မယ်။ ပစ္စည်းတစ်ခုအတွက် ပြဿနာဖြေရှင်းရတတ်တယ်။ သူတစ်ပါးရဲ့ ဒုက္ခက ကိုယ့်ဒုက္ခ ဖြစ်လာတတ် ပါတယ်။ ခြေထောက်၊ ဒူး၊ ခါး ကျန်းမာရေး ညံ့တတ်ပါတယ်။ အတို့အထောင် ချောက်တွန်းခံရတတ်တယ်။ စွပ်စွဲနာမည်ဖျက် ခံရတတ်တယ်။ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ အထူးသဖြင့် အနီးကပ်လူသုံးဦး ကိုယ့်ကို မကောင်းကြံတတ်ပါတယ်။ အဆောက်အဦကိစ္စ၊ နေရာထိုင်ခင်းကိစ္စတွေ အဆင်ပြေမယ်။ အောက်လက်ငယ်သားအတွက် ဝမ်းသာစရာတွေကြုံမယ်။ မိသားစုထဲက ရပ်ဝေးခရီးသွားတာ၊ ရပ်ဝေးက အိမ်သူအိမ်သားပြန်ရောက် လာတာ၊ ရပ်ဝေးကြီးကဲသူ ဆရာသမားတို့ရဲ့ သတင်းကောင်းကြားတာတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ ဘုရားဖူးခရီး၊ စိတ်ချမ်းသာဖွယ်ခရီးတွေလည်း သွားရတတ်ပါတယ်။ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးမှာ အဆင်ပြေ စိတ်ချမ်းသာရမယ်။ အိမ်ထောင်မရှိသူဆိုလျှင် မင်္ဂလာကိစ္စစီစဉ်ရတတ်ပါတယ်။ လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေ ဝင်လာတတ်ပါတယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၂/၈။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် မြတ်စွာဘုရားမှာ နှင်းဆီ ၇ ပွင့် လှူဒါန်းပါလေ။
ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ လုပ်သမျှ ဒုက္ခဆိုသလို ဖြစ်နေမယ်။ အင်မတန် ရန်အန္တရာယ်များတဲ့ ကာလပါပဲ။ အလုပ်မှာလည်း အထစ်အငေါ့၊ အနှောက်အယှက်တွေ အများကြီးကြုံမယ်။ မကူညီချင်တဲ့အပြင် ဒုက္ခပေးမယ့်လူတွေ တန်းစီ နေတတ်ပါတယ်။ ပြဿနာဟောင်း၊ ရောဂါဟောင်းတွေ ပြန်ပေါ်လာတတ်တယ်။ ဆွေမျိုးလို ဖြစ်နေတဲ့ မိတ်ဆွေတွေက သစ္စာဖောက်ကြလိမ့်မယ်။ ပြဿနာခပ်ကြီးကြီး တစ်ခု ဖြေရှင်းရတတ်ပါတယ်။ ကြီးကဲသူတွေကလည်း အမြင်စောင်းလိမ့်မယ်။ သူတစ်ပါး ပြဿနာကြားမှာ ညပ်သွားတတ်ပါတယ်။ ငွေရေး၊ ကြေးရေးရှုပ်ထွေးလိမ့်မယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ အကြပ်ကိုင် ဒုက္ခပေးခြင်းကို ခံရတတ်ပါတယ်။ စိတ်ညစ်စရာ ဧည့်သည်တွေ၊ သတင်းတွေလည်း ဝင်လာတတ်ပါတယ်။ အကြပ်အတည်းတွေကြားထဲကပဲ အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေ ဝင်လာမယ်။ ရပ်ဝေးနဲ့ ဆက်သွယ်တဲ့ အလုပ်တွေ အောင်မြင်မယ်။ အလုပ်နေရာ၊ အိမ်နေရာအတွက် စိတ်ချမ်းသာစရာဖြစ်လာမယ်။ အောက်လက်ငယ်သားအတွက် စိတ်ချမ်းသာရတာ ကွဲကွာနေသူတွေနဲ့ ပြန်ဆုံတာ၊ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေး စိတ်ချမ်းမြေ့စရာကြုံတာတွေ ဖြစ်လာမယ်။ ဦးခေါင်းပိုင်း ဝေဒနာ ခံစားရတတ်ပါတယ်။ ထိမိခိုက်မိဖြစ်တာ ခြေထောက်ဒုက္ခပေးတာမျိုးတွေလည်း ကြုံရတတ်ပါတယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၃/၅။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် ကျေးငှက်များကို အစာကျွေးပါလေ။
တဈပတျအတှငျး ခြိနျဆရနျ သငျ၏ကံ (၂၀၁၈ ဇနျနဝါရီ ၂၉ မှ ဖဖေျောဝါရီ ၄ )
ဒီရကျတှအေတှငျးမှာ အဘကျဘကျက ကွညျနူးဝမျးသာစရာတှကွေုံလာမယျ။ ရညျရှယျခကျြကွီးတှေ အောငျမွငျမယျ။ နာမညျဂုဏျသတငျး တိုးတကျမယျ။ ရပျဝေးအဆကျအသှယျကောငျးတှေ ရတတျတယျ။ ဝမျးသာစရာတှေ၊ ဧညျ့သညျတှတှေလေညျး ရောကျလာမယျ။ အဖိုးတနျပစ်စညျးတှေ ဝငျလာမယျ။ အဝေးရောကျ မိတျဆှေ၊ မောငျနှမတှနေဲ့ ပွနျလညျဆုံဆညျးရတတျတယျ။ အဆောကျအဦကိစ်စ၊ နရောထိုငျခငျးကိစ်စတှမှော စိတျတိုငျးကအြောငျမွငျမယျ။ အခဈြရေး၊ အိမျထောငျရေးမှာလညျး စိတျခမျြးသာရမယျ။ ပြျောရှငျဖှယျခရီးတှေ သှားရမယျ။ လူကွီးသူမ၊ ဆရာသမားတှရေဲ့ အကူအညီကောငျးရမယျ။ ပညာရေးကိစ်စ၊ သငျတနျးကိစ်စ စိတျခမျြးသာရမယျ။ အလုပျကိစ်စ သတငျးကောငျးကွားမယျ။ ခရီးအကြိုးပေးမယျ။ ငှအေတျောမြားမြား ဝငျလာလိမျ့မယျ။ ထီပေါကျသလို ဝငျတတျတယျ။ အောကျလကျငယျသား ဒုက်ခပေးတတျတယျ။ သူတဈပါးရဲ့အခဈြရေး၊ အိမျထောငျရေးမှာ ကွားညပျတတျတယျ။ ရောဂါနှဈမြိုး တဈပွိုငျနကျဖွဈတာ၊ ဒါမှမဟုတျ မိသားစုထဲမှလူနှဈယောကျ ကနျြးမာရေးညံ့တာ ကွုံရတတျပါတယျ။ နိုငျငံရပျခွားခရီး စီစဉျနသေူတှေ အဆငျပွအေောငျမွငျမယျ။ ကံအကြိုးပေးဂဏနျး ၆/၃။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရနျ ပညာရေးဆိုငျရာ ကုသိုလျပွုလုပျပါလေ။
ဒီရကျတှအေတှငျးမှာ စိတျတအားညဈရမယျ။ ဘာပဲလုပျလုပျ အထဈအငေါ့၊ အနှောကျအယှကျရှိနမေယျ။ မိတျဆှရေငျးတှေ၊ ညီအဈကိုမောငျနှမတှအေတှကျ စိတျညဈရတတျပါတယျ။ မွဈနား၊ ခြောငျးနား၊ ကနျနားကလူတှေ ဒုက်ခပေးတတျပါတယျ။ တိရစ်ဆာနျကွောငျ့စိတျညဈရတတျတယျ။ မီး၊ လြှပျစဈအန်တရာယျကွုံတာ မတျောတဆ ထိခိုကျမိတာတှေ ကွုံရတတျပါတယျ။ အဆောကျအဦကိစ်စ၊ နရောကိစ်စတှေ အခကျအခဲ ကွီးကွီးမားမား ကွုံပွီးတဲ့နောကျ အဆငျပွသှေားမယျ။ ကနျြးမာရေး ဆိုးဆိုးရှားရှားမဟုတျပမေဲ့ တရှောငျရှောငျဖွဈနမေယျ။ အလုပျမှာ အတိုကျအခံ၊ အနှောကျအယှကျ ကွီးကွီးမားမားကွုံမယျ။ ဒါပမေဲ့ အောငျမွငျသှားမယျ။ ငှရေေးကွေးရေးကတော့ အတေျာ့ကို ကွပျတညျးမယျ့အခြိနျပါပဲ။ ကဉျြးထဲ၊ ကွပျထဲအခွအေနတှေေ ကွုံရတတျပါတယျ။ တနျဖိုးကွီးပစ်စညျးတှတေော့ ဝငျလာလိမျ့မယျ။ ထှကျနတေဲ့ငှတှေေ၊ ပစ်စညျးတှလေညျး ပွနျဝငျလာတတျပါတယျ။ အောကျလကျငယျသားရဲ့ သတငျးကောငျးကွားမယျ။ ဆှမြေိုးသားခငျြးထဲက ထီဆုကွီးပေါကျတာ၊ ဆုထူး၊ ဂုဏျထူးရတာ၊ ရာထူးတကျတာတှေ ကွုံရတတျပါတယျ။ အခဈြရေး၊ အိမျထောငျရေးမှာတော့ ကောငျးသောအပွောငျးအလဲတှေ ဖွဈလာလိမျ့မယျ။ အဆကျအသှယျပွတျနသေူတှေ အဆကျအသှယျကောငျးရလိမျ့မယျ။ ကံအကြိုးပေးဂဏနျး ရ/၈။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရနျ နှမျးပါးသူမြားကို ဆီးယို ဒါနပွုပါလေ။
ဒီရကျတှအေတှငျးမှာ ကွညျနူးဝမျးမွောကျစရာတှေ ကွုံလာမယျ။ နာမညျဂုဏျသတငျး တိုးတကျမယျ။ ကွုံတောငျ့ကွုံခဲ အခှငျ့အလမျးကောငျးတှေ ရတတျတယျ။ ရညျရှယျထားသမြှ ရဲရဲသာလုပျပတေော့။ ငှအေားလူအားရှိသလောကျ လုပျငနျးတှေ တိုးခြဲ့သငျ့တဲ့ အခြိနျဖွဈပါတယျ။ ရပျဝေးနဲ့ပတျသကျတဲ့အလုပျတှေ၊ နိုငျငံခွားလူမြိုးခွားနဲ့ ပတျသကျတာတှေ ပိုပွီးတော့ အောငျမွငျမယျ။ အဖိုးတနျပစ်စညျးတှလေညျး ဝငျလာတတျပါတယျ။ ငှလေညျး အလှနျရှငျနမေယျ။ ဟိုကဝငျ ဒီကဝငျ ဝငျနမေယျ။ ဘာသာရေးလုပျလလေေ ကံကောငျးလလေဖွေဈလိမျ့မယျ။ အခဈြရေး၊ အိမျထောငျရေးမှာတော့ ဆုံးဖွတျရခကျတဲ့အခွအေနတှေေ ကွုံလာတတျတယျ။ မိတျဆှေ၊ မောငျနှမမြားနဲ့ ပတျသတျတဲ့အစီအစဉျတှေ မတငျမကဖြွဈတတျပါတယျ။ နရောထိုငျခငျး၊ အဆောကျအဦအတှကျ စိတျညဈရတတျတယျ။ အောကျလကျငယျသားအတှကျ ခေါငျးခံဖွရှေငျး ရတတျတယျ။ ပညာရေးကိစ်စ၊ သငျတနျးကိစ်စတှမှော အစီအစဉျပကျြမတတျ ဖွဈကုနျတတျတယျ။ နှဈရှညျခံစားနရေတဲ့ ရောဂါဝဒေနာတှရှေိခဲ့ရငျ ပြောကျမှနျးမသိ ပြောကျ သှားမယျ။ အဲဒီလိုပဲ ပွဿနာခပျကွီးကွီး တဈခုဟာလညျး သူ့အလိုလို ရှငျးသှားပါမယျ။ အလုပျကိစ်စ၊ လူမှုရေးကိစ်စတှမှော မိနျးမတဈယောကျ ဝငျရှုပျလာတတျပါတယျ။ ကံအကြိုးပေးဂဏနျး ၈/ဝ။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရနျ ကလေးမြားကို ခေါကျဆှဲကွျော ဒါနပွုပါလေ။
ဒီရကျတှအေတှငျးမှာ ထှကျနတေဲ့ ငှတှေေ၊ ပစ်စညျးတှေ ပွနျဝငျလာမယျ။ ရပျထားရတဲ့ အလုပျတှေ ပွနျလုပျရမယျ။ ကှဲကှာနသေူတှနေဲ့ ပွနျဆုံမယျ။ လုပျငနျးဟောငျး၊ နရောဟောငျး၊ လူဟောငျးတှနေဲ့ ပွနျပွီး ပတျသကျရတတျပါတယျ။ အဲဒီလိုပဲ ပွဿနာဟောငျး၊ ရောဂါဟောငျးတှေ ပွနျပျေါလာတတျကွောငျးကိုလညျး သတိပွုပါလေ။ ရှိနတေဲ့ပစ်စညျးတှေ ပကျြတတျ၊ ပြောကျတတျပါတယျ။ ပစ်စညျးအဝယျ၊ အရောငျးကိစ်စတဈခု လှဲခြျောသှားလိမျ့မယျ။ မနာလိုသူလညျး ပေါလိမျ့မယျ။ တမငျရနျစ နှောငျ့ယှကျတာမြိုးတှေ ခံရတတျပါတယျ။ အခဈြရေး၊ အိမျထောငျရေးမှာ မတငျမကအြခွအေနတှေေ ကွုံလာမယျ။ ကတိပေးမှားတာ၊ စာခြုပျမှားတာတှေ ဖွဈတတျပါတယျ။ အရေးကွီး စာရှကျစာတမျးတှေ ပကျြစီးပြောကျဆုံးတတျပါတယျ။ အောကျလကျငယျသား၊ သားသမီးအတှကျ ဂုဏျယူဝမျးမွောကျစရာတှေ ကွုံလာမယျ။ အဖိုးတနျ ယာဉျတှေ၊ စကျတှေ ဝငျလာမယျ။ ကနျြးမာရေးညံ့နသေူတှေ ပွနျပွီး နာလနျထလိမျ့မယျ။ ရခြေိုးမှားတာ၊ အပူလောငျတာတှတေော့ ဖွဈတတျပါတယျ။ ပညာရေးကိစ်စ၊ သငျတနျးကိစ်စ ထူးထူးခြှနျခြှနျ အောငျမွငျမယျ။ ရပျဝေးလူကွီးတှကေ ကူညီမယျ။ ကောငျးသောခရီးတှေ သှားရတတျပါတယျ။ ငှအေတှကျလညျး စိတျခမျြးသာရလိမျ့မယျ။ ကံအကြိုးပေးဂဏနျး ၆/၃။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရနျ ကွီးကဲသူမြားကို ဆေးဝါးလှူဒါနျးပါလေ။
ဒီရကျတှအေတှငျးမှာ စိတျနှဈခှဖွဈစရာတှေ၊ မတငျမကဖြွဈစရာတှေ တဈခုပွီးတဈခု ကွုံနတေတျပါတယျ။ သခြောစီစဉျထားတဲ့ ကိစ်စတှလေညျး လှဲသှား၊ ခြျောသှားတတျတယျ။ အလုပျကိစ်စတှမှော ကွီးကွီးမားမား နဈနာဆုံးရှုံးခွငျးတှေ ကွုံရတတျပါတယျ။ ပစ်စညျးတဈခုကို အကွောငျးပွုပွီး စကားမြားဖွရှေငျးရတတျပါတယျ။ မိသားစုအတှငျးမှာ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ ညှိမရ နှိုငျးမရတှေ ဖွဈတတျပါတယျ။ အောကျလကျငယျသားအတှကျလညျး စိတျရှုပျရလိမျ့မယျ။ မိနျးမကွီးတဈယောကျ ဝငျရှုပျနတေတျပါတယျ။ ရပျဝေးက မိတျဆှတှေေ၊ ဆှမြေိုးသားခငျြးတှေ ရောကျလာတတျတယျ။ သူတို့ဆီမှာ သတငျးကောငျး၊ အဆကျအသှယျကောငျးတှေ ပါလာတတျတယျ။ ဆရာသမားလို ပုဂ်ဂိုလျတှကေ အကူအညီကောငျးပေးလာမယျ။ ရပျဝေးနဲ့ပတျသကျပွီး ငှဝေငျတာ၊ ငှကေိစ်စခရီးသှားရတာ၊ ထီပေါကျသလို ငှဝေငျလာတာမြိုးတှေ ကွုံရတတျပါတယျ။ အလှူပှဲ၊ မင်ျဂလာပှဲကိစ်စတှအေတှကျ စိတျညဈရတတျတယျ။ အခဈြရေး၊ အိမျထောငျရေးမှာတော့ တဈဦးနဲ့တဈဦး အထငျအမွငျလှဲမှားတာလေးတှေ ကွုံပွီးတဲ့နောကျ အဆငျပွသှေားပါလိမျ့မယျ။ ပညာရေးကိစ်စ၊ သငျတနျးကိစ်စတှေ အဆငျပွအေောငျမွငျမယျ။ ဝမျးဗိုကျပိုငျး၊ ဆီး၊ မကျြစိ ကနျြးမာရေးညံ့တတျပါတယျ။ ကံအကြိုးပေးဂဏနျး ၁/၆။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရနျ မွတျစှာဘုရားမှာ သပွေ ၂၁ ညှနျ့ လှူဒါနျးပါလေ။
ဒီရကျတှအေတှငျးမှာ လုပျသမြှ၊ ကွံသမြှ ထဈငေါ့ကွနျ့ကွာပွီးမှ ထူးထူးခွားခွား အောငျမွငျမှုကွီးတှေ ရတတျပါတယျ။ အပငျပမျးခံပွီး အကြိုးထူးခံစားရမယျ့ ကာလမြိုး ဖွဈပါတယျ။ နာမညျဂုဏျသတငျး တိုးတကျမယျ။ ငှအေဝငျကွမျး အထှကျကွမျးဖွဈနမေယျ။ ထီကိနျး ထီကံကောငျးတဲ့ကာလပါပဲ။ မိတျဆှေ၊ မောငျနှမတို့ရဲ့ အခဈြရေး၊ အိမျထောငျရေး ရှုပျထှေးလိမျ့မယျ။ ပစ်စညျးတဈခုအတှကျ ပွဿနာဖွရှေငျးရတတျတယျ။ သူတဈပါးရဲ့ ဒုက်ခက ကိုယျ့ဒုက်ခ ဖွဈလာတတျ ပါတယျ။ ခွထေောကျ၊ ဒူး၊ ခါး ကနျြးမာရေး ညံ့တတျပါတယျ။ အတို့အထောငျ ခြောကျတှနျးခံရတတျတယျ။ စှပျစှဲနာမညျဖကျြ ခံရတတျတယျ။ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးတော့မဟုတျပါဘူး။ အထူးသဖွငျ့ အနီးကပျလူသုံးဦး ကိုယျ့ကို မကောငျးကွံတတျပါတယျ။ အဆောကျအဦကိစ်စ၊ နရောထိုငျခငျးကိစ်စတှေ အဆငျပွမေယျ။ အောကျလကျငယျသားအတှကျ ဝမျးသာစရာတှကွေုံမယျ။ မိသားစုထဲက ရပျဝေးခရီးသှားတာ၊ ရပျဝေးက အိမျသူအိမျသားပွနျရောကျ လာတာ၊ ရပျဝေးကွီးကဲသူ ဆရာသမားတို့ရဲ့ သတငျးကောငျးကွားတာတှေ ကွုံရတတျပါတယျ။ ဘုရားဖူးခရီး၊ စိတျခမျြးသာဖှယျခရီးတှလေညျး သှားရတတျပါတယျ။ အခဈြရေး၊ အိမျထောငျရေးမှာ အဆငျပွေ စိတျခမျြးသာရမယျ။ အိမျထောငျမရှိသူဆိုလြှငျ မင်ျဂလာကိစ်စစီစဉျရတတျပါတယျ။ လကျဆောငျပစ်စညျးတှေ ဝငျလာတတျပါတယျ။ ကံအကြိုးပေးဂဏနျး ၂/၈။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရနျ မွတျစှာဘုရားမှာ နှငျးဆီ ရ ပှငျ့ လှူဒါနျးပါလေ။
ဒီရကျတှအေတှငျးမှာ လုပျသမြှ ဒုက်ခဆိုသလို ဖွဈနမေယျ။ အငျမတနျ ရနျအန်တရာယျမြားတဲ့ ကာလပါပဲ။ အလုပျမှာလညျး အထဈအငေါ့၊ အနှောကျအယှကျတှေ အမြားကွီးကွုံမယျ။ မကူညီခငျြတဲ့အပွငျ ဒုက်ခပေးမယျ့လူတှေ တနျးစီ နတေတျပါတယျ။ ပွဿနာဟောငျး၊ ရောဂါဟောငျးတှေ ပွနျပျေါလာတတျတယျ။ ဆှမြေိုးလို ဖွဈနတေဲ့ မိတျဆှတှေကေ သစ်စာဖောကျကွလိမျ့မယျ။ ပွဿနာခပျကွီးကွီး တဈခု ဖွရှေငျးရတတျပါတယျ။ ကွီးကဲသူတှကေလညျး အမွငျစောငျးလိမျ့မယျ။ သူတဈပါး ပွဿနာကွားမှာ ညပျသှားတတျပါတယျ။ ငှရေေး၊ ကွေးရေးရှုပျထှေးလိမျ့မယျ။ တဈစုံတဈယောကျရဲ့ အကွပျကိုငျ ဒုက်ခပေးခွငျးကို ခံရတတျပါတယျ။ စိတျညဈစရာ ဧညျ့သညျတှေ၊ သတငျးတှလေညျး ဝငျလာတတျပါတယျ။ အကွပျအတညျးတှကွေားထဲကပဲ အဖိုးတနျပစ်စညျးတှေ ဝငျလာမယျ။ ရပျဝေးနဲ့ ဆကျသှယျတဲ့ အလုပျတှေ အောငျမွငျမယျ။ အလုပျနရော၊ အိမျနရောအတှကျ စိတျခမျြးသာစရာဖွဈလာမယျ။ အောကျလကျငယျသားအတှကျ စိတျခမျြးသာရတာ ကှဲကှာနသေူတှနေဲ့ ပွနျဆုံတာ၊ အခဈြရေး၊ အိမျထောငျရေး စိတျခမျြးမွစေ့ရာကွုံတာတှေ ဖွဈလာမယျ။ ဦးခေါငျးပိုငျး ဝဒေနာ ခံစားရတတျပါတယျ။ ထိမိခိုကျမိဖွဈတာ ခွထေောကျဒုက်ခပေးတာမြိုးတှလေညျး ကွုံရတတျပါတယျ။ ကံအကြိုးပေးဂဏနျး ၃/၅။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရနျ ကြေးငှကျမြားကို အစာကြှေးပါလေ။
၁။ ဟေတုပစ္စယော –
သတ္တဝါအားလုံး – မကောင်းသော လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ အကုသိုလ်ဟိတ်တရားတို့ကို ပယ်ရှားနိုင်ကြ၍ ကောင်းမြတ်သော အလောဘ၊ အဒေါသ (မေတ္တာ)၊ အမောဟ (ပညာ) ကုသိုလ်ဟိတ် တရားတို့သာ အမြစ်သဖွယ် ကိန်းတည်ကြပြီး ကောင်းမြတ်သော စိတ်၊ စေတသိက်၊ ရုပ် တရားတို့သာ နိဗ္ဗာန်ထိတိုင် တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ကြပါစေ။
၂။ အာရမ္မဏပစ္စယော –
သတ္တဝါအားလုံး – မကောင်းသော ရူပါရုံ၊ သဒ္ဒါရုံ၊ ဂန္ဓာရုံ၊ ရသာရုံ၊ ဖောဋ္ဌဗ္ဗာရုံ၊ ဓမ္မာရုံတို့နှင့် မတွေ့ကြုံကြဘဲ ကောင်းမြတ်သော အာရုံများနှင့်သာ တွေ့ကြုံကြ၍ ကောင်းမြတ်သော အကျိုးတရားတို့ကိုသာ ရရှိခံစားနိုင်ကြပါစေ။
၃။ အဓိပတိပစ္စယော –
သတ္တဝါအားလုံးတို့၏ သန္တာန်၌ မထက်မြက်သော ညံ့သော ဆန္ဒ၊ ဝီရိယ၊ စိတ်၊ ပညာ တရားတို့ အကြီးအမှူး ဦးစီး ဦးဆောင် မပြုကြဘဲ ထက်မြက်သော ကောင်းသော ဆန္ဒ၊ ဝီရိယ၊ စိတ်၊ ပညာ တရားတို့သာ အကြီးအမှူး ဦးစီး ဦးဆောင်ပြုကြလျက် အလွန်အကြူး အထူးကြီးကျယ် မြင့်မြတ်သော အကျိုးတရားတို့သာ ရရှိခံစားနိုင်ကြပါစေ။
၄။ အနန္တရပစ္စယော –
သတ္တဝါအားလုံး – မကောင်းသောစိတ်၊ စေတသိက်(နာမ်) တရားတို့ အကြားအလပ်မရှိ ဆက်ကာ ဆက်ကာ မဖြစ်ကြဘဲ၊ ကောင်းမြတ်သော စိတ်၊ စေတသိက်(နာမ်) တရားတို့သာ အကြားအလပ်မရှိ စဉ်ဆက်မပြတ် ဆက်ကာ ဆက်ကာ ဖြစ်ပွားနိုင်ကြပါစေ။
၅။ သမနန္တရပစ္စယော –
သတ္တဝါအားလုံး – မကောင်းသောစိတ်၊ စေတသိက်(နာမ်) တရားတို့ (ကောင်းစွာ) အကြားအလပ်မရှိ ဆက်ကာ ဆက်ကာ မဖြစ်ကြဘဲ၊ ကောင်းမြတ်သော စိတ်၊ စေတသိက်(နာမ်) တရားတို့သာ (ကောင်းစွာ) အကြားအလပ်မရှိ စဉ်ဆက်မပြတ် ဆက်ကာ ဆက်ကာ ဖြစ်ပွားနိုင်ကြပါစေ။
၆။ သဟဇာတပစ္စယော –
သတ္တဝါအားလုံး – မကောင်းသော ရုပ်၊ နာမ်တရားများ အတူတကွ မဖြစ်ကြဘဲ ကောင်းသော ရုပ်၊ နာမ်တရားများသာ အတူတကွ ဖြစ်နိုင် ကျေးဇူးပြုနိုင်ကြပါစေ။
၇။ အညမညပစ္စယော –
သတ္တဝါအားလုံး – မကောင်းသော ရုပ်၊ နာမ်တရားများနှင့် အချင်းချင်းယှဉ်တွဲ၍ အပြန်အလှန် ကျေးဇူးမပြုကြဘဲ ကောင်းမြတ်သော ရုပ်၊ နာမ်တရားများတို့နှင့်သာ အချင်းချင်းယှဉ်တွဲ၍ အပြန်အလှန် ကျေးဇူးပြုမှုကို ခံစားနိုင်ကြပါစေ။
၈။ နိဿယပစ္စယော –
သတ္တဝါအားလုံး – မကောင်းသော ရုပ်၊ နာမ်တရားတို့၌ မှီ၍ မဖြစ်ကြဘဲ၊ ကောင်းမြတ်သော ရုပ်၊ နာမ်တရားတို့၌သာ အမှီပြု၍ ကောင်းကျိုးအမျိုးမျိုးတို့ကိုသာ ခံစားနိုင်ကြပါစေ။
၉။ ဥပနိဿယပစ္စယော –
သတ္တဝါအားလုံး – မကောင်းသော ပညတ်၊ နာမ်၊ ရုပ် တရားတို့နှင့် မကောင်းသော မိဘ၊ မကောင်းသော ဆရာ၊ မိတ်ဆွေ၊ ရာသီဥတု၊ နေရာထိုင်ခင်း၊ အစားအသောက်တို့၌ အားကြီးသော မှီရာအဖြစ် အမှီမပြုကြရဘဲ ကောင်းသော ပညတ်၊ နာမ် ရုပ် တရားများနှင့် ကောင်းမြတ်သော မိဘ၊ ဆရာ၊ မိတ်ဆွေ၊ ရာသီဥတု၊ နေရာထိုင်ခင်း၊ အစားအသောက်တို့၌သာ အားကြီးသော မှီရာအဖြစ် မှီကြရ၍ ကောင်းကျိုး အမျိုးမျိုးတို့ကိုသာ ခံစားရရှိနိုင်ကြပါစေ။
၁၀။ ပုရေဇာတပစ္စယော –
သတ္တဝါအားလုံး – မကောင်းသော အာရုံ ၅ ပါး ရုပ်တရား၊ ဝတ္ထု ရုပ်တရားများ ရှေးဦးကြိုတင် မဖြစ်ကြဘဲ ကောင်းမြတ်သော အာရုံ ၅ ပါး ရုပ်တရားများ၊ ဝတ္ထု ရုပ်တရားများသာ ရှေးဦးကြိုတင် ဖြစ်နှင့်ကြ၍ ကောင်းမြတ်သော ကုသိုလ်တရား၊ အကျိုးဝိပါတ်တရားတို့သာ တိုးပွားဖြစ်ထွန်း နိုင်ကြပါစေ။
၁၁။ ပစ္ဆာဇာတပစ္စယော –
သတ္တဝါအားလုံးတို့၏ ဖြစ်နှင့်ပြီးသော ရှေးရှေးရုပ်တရားအား နောက်နောက်မှ ဖြစ်သော နာမ်တရားများက ကျေးဇူးပြုရာတွင် မကောင်းသော အကုသိုလ် နာမ်တရားတို့၏ ကျေးဇူးပြုမှုကို မခံကြရဘဲ ကောင်းမြတ်သော ကုသိုလ်၊ အဗျာကတ နာမ်တရားတို့၏ ကျေးဇူးပြုမှုကိုသာ ခံယူနိုင်ကြပါစေ။
သတ္တဝါအားလုံး – မကောင်းသော အကုသိုလ်တရားများ အဖန်တလဲလဲ ထုံခြင်းသဘောဖြင့် ထပ်ကာ ထပ်ကာ မဖြစ်ပွားကြဘဲ ကောင်းမြတ်သော ကုသိုလ်တရား ကြိယာအဗျာကတ တရားတို့သာ မဂ်ဖိုလ်နိဗ္ဗာန်တိုင်ထိ အဖန်တလဲလဲထုံခြင်းဖြင့် ထပ်ကာထပ်ကာ ဖြစ်ပွားနိုင်ကြပါစေ။
၁၃။ ကမ္မပစ္စယော – သတ္တဝါအားလုံး –
မကောင်းသော စေတနာကံတရားတို့ကို မပြုလုပ်ဖြစ်ကြဘဲ၊ ကောင်းမြတ်သော စေတနာကံတရားတို့ကိုသာ ပြုလုပ်ဖြစ်ကြ၍ ယခုဘဝ နောင်ဘဝ နိဗ္ဗာန်တိုင်ထိ ကောင်းကျိုးအဆက်ဆက်တို့ကိုသာ ခံစားရရှိနိုင်ကြပါစေ။
၁၄။ ဝိပါကပစ္စယော – သတ္တဝါအားလုံး –
ကောင်းမြတ်သော အကျိုးတရားတို့ကိုသာ အဆက်မပြတ် ရရှိပိုင်ဆိုင်ကြ၍ ထိုမှတဆင့် ကောင်းမြတ်သော အကျိုးတရား အမျိုးမျိုးတို့ကိုသာ နိဗ္ဗာန်တိုင်ထိ ထပ်ကာ ထပ်ကာ ရရှိခံစားနိုင်ကြပါစေ။
၁၅။ အာဟာရပစ္စယော –
သတ္တဝါအားလုံး – ရရှိထားကြသော နာမ်ရုပ်ခန္ဓာကြီးအား မကောင်းသော ရုပ်အာဟာရ သြဇာဓာတ်များ၊ မကောင်းသော နာမ်အာဟာရ ဓာတ်များဖြင့် အထောက်အပံ့မပြုကြဘဲ ကောင်းမြတ်သော ရုပ် နာမ် အာဟာရဓာတ် တို့ဖြင့်သာ အထောက်အပံ့ ပြုဖြစ်ကြ၍ နိဗ္ဗာန်ကို လွယ်ကူစွာ မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေ။
၁၆။ ဣန္ဒြိယ ပစ္စယော –
သတ္တဝါအားလုံး – မကောင်းသော ရုပ်နာမ်တရားတို့၏ လွှမ်းမိုးအုပ်ချုပ် ချယ်လှယ်မှုကို မခံကြရဘဲ ကောင်းမွန်သော ရုပ်နာမ်တရားတို့၏ လွှမ်းမိုးအုပ်ချုပ် ချယ်လှယ်မှုတို့ကိုသာ နိဗ္ဗာန်တိုင်ထိ ရရှိခံစား နိုင်ကြပါစေ။
၁၇။ ဈာနပစ္စယော –
သတ္တဝါအားလုံး – မကောင်းသော အကုသိုလ်တရားတို့၌ စူးစူးစိုက်စိုက် အာရုံမပြုဖြစ်ကြဘဲ ကောင်းမြတ်သော ကုသိုလ်တရားတို့၌သာ စူးစူးစိုက်စိုက် အာရုံပြုနိုင်ကြ၍ နိဗ္ဗာန် တိုင်ထိ ကောင်းကျိုးတရားတို့ကို ရရှိနိုင်ကြပါစေ။
၁၈။ မဂ္ဂပစ္စယော –
သတ္တဝါအားလုံး – ဒုဂ္ဂတိဘုံသို့ ရောက်စေတတ်သည့် မကောင်းသော အကုသိုလ် မဂ္ဂင်ခရီး လမ်းကြောင်းကို မလျှောက်ဖြစ်ကြဘဲ သုဂတိဘုံ နိဗ္ဗာန်ဘုံတို့ကိုသာ ရောက်စေနိုင်သော ကောင်းမြတ်သော ကုသိုလ်မဂ္ဂင်လမ်းကြောင်းကိုသာ လျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါစေ။
၁၉။ သမ္ပယုတ္တပစ္စယော –
သတ္တဝါအားလုံး – မကောင်းသော စိတ် စေတသိက် နာမ်တရားအချင်းချင်း အညီအညွတ် ယှဉ်တွဲပေါင်းစပ်ခြင်း မပြုကြဘဲ ကောင်းသောစိတ် စေတသိက် နာမ်တရားအချင်းချင်းတို့သာ အညီအညွတ် ယှဉ်တွဲပေါင်းစပ်၍ နိဗ္ဗာန်တိုင်ထိ သွားနိုင်ကြပါစေ။
၂၀။ ဝိပ္ပယုတ္တပစ္စယော –
သတ္တဝါအားလုံး – အချင်းချင်း အညီအညွတ် မယှဉ်တွဲသောအားဖြင့် ရုပ်နာမ်တရားတို့ ကျေးဇူးပြုရာ၌ မကောင်းသော ရုပ်နာမ်တရားတို့ မယှဉ်တွဲသောအားဖြင့် ကျေးဇူးမပြုကြဘဲ ကောင်းမြတ်သော နာမ်တရားတို့က ကောင်းမွန်သော ရုပ်တရားတို့ကို၊ ကောင်းမွန်သော ရုပ်တရားတို့က ကောင်းမြတ်သော နာမ်တရားတို့ကို မယှဉ်တွဲသောအားဖြင့် ကျေးဇူးပြုနိုင်ကြ၍ နိဗ္ဗာန်တိုင်ထိ ကောင်းကျိုးအမျိုးမျိုးတို့ကိုသာ ရရှိခံစားနိုင်ကြပါစေ။
၂၁။ အတ္ထိပစ္စယော –
သတ္တဝါအားလုံး – မကောင်းသော ရုပ်နာမ်တရားတို့ ထင်ရှားစွာ မဖြစ်ပေါ်ကြဘဲ ကောင်းသော ရုပ်နာမ် တရားတို့သာ ထင်ရှားစွာဖြစ်ပေါ်ကြ၍ ကောင်းကျိုးအမျိုးမျိုးတို့သာ နိဗ္ဗာန်တိုင်ထိ တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ကြပါစေ။
၂၂။ နတ္ထိပစ္စယော –
သတ္တဝါအားလုံး – မကောင်းသော နာမ်တရားတို့ ချုပ်ငြိမ်းသွားခြင်း မရှိတော့ခြင်းဖြင့် ကောင်းသော နာမ်တရားတို့သာ နိဗ္ဗာန်တိုင်ထိ အစားထိုးကာ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနိုင်ကြပါစေ။
၂၃။ ဝိဂတပစ္စယော –
သတ္တဝါအားလုံး – မကောင်းသော နာမ်တရားတို့ ကင်းစင်သွားခြင်း၊ မရှိတော့ခြင်းဖြင့် ကောင်းသော နာမ်တရားတို့သာ နိဗ္ဗာန်တိုင်ထိ အစားထိုးကာ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနိုင်ကြပါစေ။
၂၄။ အဝိဂတပစ္စယော –
သတ္တဝါအားလုံး – မကောင်းသော ရုပ်နာမ်တရားတို့ မကင်းသောအားဖြင့် မဖြစ်ပေါ်ကြဘဲ ကောင်းသော ရုပ်နာမ်တရားတို့သာ မကင်းကွာသောအားဖြင့် ဖြစ်ပေါ်ကြ၍ ကောင်းကျိုးအမျိုးမျိုးတို့သာ နိဗ္ဗာန်တိုင်ထိ တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ကြပါစေ။
၁။ ဟတေုပစ်စယော –
သတ်တဝါအားလုံး – မကောငျးသော လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ အကုသိုလျဟိတျတရားတို့ကို ပယျရှားနိုငျကွ၍ ကောငျးမွတျသော အလောဘ၊ အဒေါသ (မတ်ေတာ)၊ အမောဟ (ပညာ) ကုသိုလျဟိတျ တရားတို့သာ အမွဈသဖှယျ ကိနျးတညျကွပွီး ကောငျးမွတျသော စိတျ၊ စတေသိကျ၊ ရုပျ တရားတို့သာ နိဗ်ဗာနျထိတိုငျ တိုးတကျဖွဈထှနျးနိုငျကွပါစေ။
၂။ အာရမ်မဏပစ်စယော –
သတ်တဝါအားလုံး – မကောငျးသော ရူပါရုံ၊ သဒ်ဒါရုံ၊ ဂန်ဓာရုံ၊ ရသာရုံ၊ ဖောဋ်ဌဗ်ဗာရုံ၊ ဓမ်မာရုံတို့နှငျ့ မတှကွေုံ့ကွဘဲ ကောငျးမွတျသော အာရုံမြားနှငျ့သာ တှကွေုံ့ကွ၍ ကောငျးမွတျသော အကြိုးတရားတို့ကိုသာ ရရှိခံစားနိုငျကွပါစေ။
၃။ အဓိပတိပစ်စယော –
သတ်တဝါအားလုံးတို့၏ သန်တာနျ၌ မထကျမွကျသော ညံ့သော ဆန်ဒ၊ ဝီရိယ၊ စိတျ၊ ပညာ တရားတို့ အကွီးအမှူး ဦးစီး ဦးဆောငျ မပွုကွဘဲ ထကျမွကျသော ကောငျးသော ဆန်ဒ၊ ဝီရိယ၊ စိတျ၊ ပညာ တရားတို့သာ အကွီးအမှူး ဦးစီး ဦးဆောငျပွုကွလကျြ အလှနျအကွူး အထူးကွီးကယျြ မွငျ့မွတျသော အကြိုးတရားတို့သာ ရရှိခံစားနိုငျကွပါစေ။
၄။ အနန်တရပစ်စယော –
သတ်တဝါအားလုံး – မကောငျးသောစိတျ၊ စတေသိကျ(နာမျ) တရားတို့ အကွားအလပျမရှိ ဆကျကာ ဆကျကာ မဖွဈကွဘဲ၊ ကောငျးမွတျသော စိတျ၊ စတေသိကျ(နာမျ) တရားတို့သာ အကွားအလပျမရှိ စဉျဆကျမပွတျ ဆကျကာ ဆကျကာ ဖွဈပှားနိုငျကွပါစေ။
၅။ သမနန်တရပစ်စယော –
သတ်တဝါအားလုံး – မကောငျးသောစိတျ၊ စတေသိကျ(နာမျ) တရားတို့ (ကောငျးစှာ) အကွားအလပျမရှိ ဆကျကာ ဆကျကာ မဖွဈကွဘဲ၊ ကောငျးမွတျသော စိတျ၊ စတေသိကျ(နာမျ) တရားတို့သာ (ကောငျးစှာ) အကွားအလပျမရှိ စဉျဆကျမပွတျ ဆကျကာ ဆကျကာ ဖွဈပှားနိုငျကွပါစေ။
၆။ သဟဇာတပစ်စယော –
သတ်တဝါအားလုံး – မကောငျးသော ရုပျ၊ နာမျတရားမြား အတူတကှ မဖွဈကွဘဲ ကောငျးသော ရုပျ၊ နာမျတရားမြားသာ အတူတကှ ဖွဈနိုငျ ကြေးဇူးပွုနိုငျကွပါစေ။
၇။ အညမညပစ်စယော –
သတ်တဝါအားလုံး – မကောငျးသော ရုပျ၊ နာမျတရားမြားနှငျ့ အခငျြးခငျြးယှဉျတှဲ၍ အပွနျအလှနျ ကြေးဇူးမပွုကွဘဲ ကောငျးမွတျသော ရုပျ၊ နာမျတရားမြားတို့နှငျ့သာ အခငျြးခငျြးယှဉျတှဲ၍ အပွနျအလှနျ ကြေးဇူးပွုမှုကို ခံစားနိုငျကွပါစေ။
၈။ နိဿယပစ်စယော –
သတ်တဝါအားလုံး – မကောငျးသော ရုပျ၊ နာမျတရားတို့၌ မှီ၍ မဖွဈကွဘဲ၊ ကောငျးမွတျသော ရုပျ၊ နာမျတရားတို့၌သာ အမှီပွု၍ ကောငျးကြိုးအမြိုးမြိုးတို့ကိုသာ ခံစားနိုငျကွပါစေ။
၉။ ဥပနိဿယပစ်စယော –
သတ်တဝါအားလုံး – မကောငျးသော ပညတျ၊ နာမျ၊ ရုပျ တရားတို့နှငျ့ မကောငျးသော မိဘ၊ မကောငျးသော ဆရာ၊ မိတျဆှေ၊ ရာသီဥတု၊ နရောထိုငျခငျး၊ အစားအသောကျတို့၌ အားကွီးသော မှီရာအဖွဈ အမှီမပွုကွရဘဲ ကောငျးသော ပညတျ၊ နာမျ ရုပျ တရားမြားနှငျ့ ကောငျးမွတျသော မိဘ၊ ဆရာ၊ မိတျဆှေ၊ ရာသီဥတု၊ နရောထိုငျခငျး၊ အစားအသောကျတို့၌သာ အားကွီးသော မှီရာအဖွဈ မှီကွရ၍ ကောငျးကြိုး အမြိုးမြိုးတို့ကိုသာ ခံစားရရှိနိုငျကွပါစေ။
၁၀။ ပုရဇောတပစ်စယော –
သတ်တဝါအားလုံး – မကောငျးသော အာရုံ ၅ ပါး ရုပျတရား၊ ဝတ်ထု ရုပျတရားမြား ရှေးဦးကွိုတငျ မဖွဈကွဘဲ ကောငျးမွတျသော အာရုံ ၅ ပါး ရုပျတရားမြား၊ ဝတ်ထု ရုပျတရားမြားသာ ရှေးဦးကွိုတငျ ဖွဈနှငျ့ကွ၍ ကောငျးမွတျသော ကုသိုလျတရား၊ အကြိုးဝိပါတျတရားတို့သာ တိုးပှားဖွဈထှနျး နိုငျကွပါစေ။
၁၁။ ပစ်ဆာဇာတပစ်စယော –
သတ်တဝါအားလုံးတို့၏ ဖွဈနှငျ့ပွီးသော ရှေးရှေးရုပျတရားအား နောကျနောကျမှ ဖွဈသော နာမျတရားမြားက ကြေးဇူးပွုရာတှငျ မကောငျးသော အကုသိုလျ နာမျတရားတို့၏ ကြေးဇူးပွုမှုကို မခံကွရဘဲ ကောငျးမွတျသော ကုသိုလျ၊ အဗြာကတ နာမျတရားတို့၏ ကြေးဇူးပွုမှုကိုသာ ခံယူနိုငျကွပါစေ။
၁၂။ အာသဝေနပစ်စယော –
သတ်တဝါအားလုံး – မကောငျးသော အကုသိုလျတရားမြား အဖနျတလဲလဲ ထုံခွငျးသဘောဖွငျ့ ထပျကာ ထပျကာ မဖွဈပှားကွဘဲ ကောငျးမွတျသော ကုသိုလျတရား ကွိယာအဗြာကတ တရားတို့သာ မဂျဖိုလျနိဗ်ဗာနျတိုငျထိ အဖနျတလဲလဲထုံခွငျးဖွငျ့ ထပျကာထပျကာ ဖွဈပှားနိုငျကွပါစေ။
၁၃။ ကမ်မပစ်စယော – သတ်တဝါအားလုံး –
မကောငျးသော စတေနာကံတရားတို့ကို မပွုလုပျဖွဈကွဘဲ၊ ကောငျးမွတျသော စတေနာကံတရားတို့ကိုသာ ပွုလုပျဖွဈကွ၍ ယခုဘဝ နောငျဘဝ နိဗ်ဗာနျတိုငျထိ ကောငျးကြိုးအဆကျဆကျတို့ကိုသာ ခံစားရရှိနိုငျကွပါစေ။
၁၄။ ဝိပါကပစ်စယော – သတ်တဝါအားလုံး –
ကောငျးမွတျသော အကြိုးတရားတို့ကိုသာ အဆကျမပွတျ ရရှိပိုငျဆိုငျကွ၍ ထိုမှတဆငျ့ ကောငျးမွတျသော အကြိုးတရား အမြိုးမြိုးတို့ကိုသာ နိဗ်ဗာနျတိုငျထိ ထပျကာ ထပျကာ ရရှိခံစားနိုငျကွပါစေ။
၁၅။ အာဟာရပစ်စယော –
သတ်တဝါအားလုံး – ရရှိထားကွသော နာမျရုပျခန်ဓာကွီးအား မကောငျးသော ရုပျအာဟာရ သွဇာဓာတျမြား၊ မကောငျးသော နာမျအာဟာရ ဓာတျမြားဖွငျ့ အထောကျအပံ့မပွုကွဘဲ ကောငျးမွတျသော ရုပျ နာမျ အာဟာရဓာတျ တို့ဖွငျ့သာ အထောကျအပံ့ ပွုဖွဈကွ၍ နိဗ်ဗာနျကို လှယျကူစှာ မကျြမှောကျပွုနိုငျကွပါစေ။
၁၆။ ဣန်ဒွိယ ပစ်စယော –
သတ်တဝါအားလုံး – မကောငျးသော ရုပျနာမျတရားတို့၏ လှမျးမိုးအုပျခြုပျ ခယျြလှယျမှုကို မခံကွရဘဲ ကောငျးမှနျသော ရုပျနာမျတရားတို့၏ လှမျးမိုးအုပျခြုပျ ခယျြလှယျမှုတို့ကိုသာ နိဗ်ဗာနျတိုငျထိ ရရှိခံစား နိုငျကွပါစေ။
၁၇။ စြာနပစ်စယော –
သတ်တဝါအားလုံး – မကောငျးသော အကုသိုလျတရားတို့၌ စူးစူးစိုကျစိုကျ အာရုံမပွုဖွဈကွဘဲ ကောငျးမွတျသော ကုသိုလျတရားတို့၌သာ စူးစူးစိုကျစိုကျ အာရုံပွုနိုငျကွ၍ နိဗ်ဗာနျ တိုငျထိ ကောငျးကြိုးတရားတို့ကို ရရှိနိုငျကွပါစေ။
၁၈။ မဂ်ဂပစ်စယော –
သတ်တဝါအားလုံး – ဒုဂ်ဂတိဘုံသို့ ရောကျစတေတျသညျ့ မကောငျးသော အကုသိုလျ မဂ်ဂငျခရီး လမျးကွောငျးကို မလြှောကျဖွဈကွဘဲ သုဂတိဘုံ နိဗ်ဗာနျဘုံတို့ကိုသာ ရောကျစနေိုငျသော ကောငျးမွတျသော ကုသိုလျမဂ်ဂငျလမျးကွောငျးကိုသာ လြှောကျလှမျးနိုငျကွပါစေ။
၁၉။ သမ်ပယုတ်တပစ်စယော –
သတ်တဝါအားလုံး – မကောငျးသော စိတျ စတေသိကျ နာမျတရားအခငျြးခငျြး အညီအညှတျ ယှဉျတှဲပေါငျးစပျခွငျး မပွုကွဘဲ ကောငျးသောစိတျ စတေသိကျ နာမျတရားအခငျြးခငျြးတို့သာ အညီအညှတျ ယှဉျတှဲပေါငျးစပျ၍ နိဗ်ဗာနျတိုငျထိ သှားနိုငျကွပါစေ။
၂၀။ ဝိပ်ပယုတ်တပစ်စယော –
သတ်တဝါအားလုံး – အခငျြးခငျြး အညီအညှတျ မယှဉျတှဲသောအားဖွငျ့ ရုပျနာမျတရားတို့ ကြေးဇူးပွုရာ၌ မကောငျးသော ရုပျနာမျတရားတို့ မယှဉျတှဲသောအားဖွငျ့ ကြေးဇူးမပွုကွဘဲ ကောငျးမွတျသော နာမျတရားတို့က ကောငျးမှနျသော ရုပျတရားတို့ကို၊ ကောငျးမှနျသော ရုပျတရားတို့က ကောငျးမွတျသော နာမျတရားတို့ကို မယှဉျတှဲသောအားဖွငျ့ ကြေးဇူးပွုနိုငျကွ၍ နိဗ်ဗာနျတိုငျထိ ကောငျးကြိုးအမြိုးမြိုးတို့ကိုသာ ရရှိခံစားနိုငျကွပါစေ။
၂၁။ အတ်ထိပစ်စယော –
သတ်တဝါအားလုံး – မကောငျးသော ရုပျနာမျတရားတို့ ထငျရှားစှာ မဖွဈပျေါကွဘဲ ကောငျးသော ရုပျနာမျ တရားတို့သာ ထငျရှားစှာဖွဈပျေါကွ၍ ကောငျးကြိုးအမြိုးမြိုးတို့သာ နိဗ်ဗာနျတိုငျထိ တိုးတကျဖွဈထှနျးနိုငျကွပါစေ။
၂၂။ နတ်ထိပစ်စယော –
သတ်တဝါအားလုံး – မကောငျးသော နာမျတရားတို့ ခြုပျငွိမျးသှားခွငျး မရှိတော့ခွငျးဖွငျ့ ကောငျးသော နာမျတရားတို့သာ နိဗ်ဗာနျတိုငျထိ အစားထိုးကာ ဆကျလကျဖွဈပှားနိုငျကွပါစေ။
၂၃။ ဝိဂတပစ်စယော –
သတ်တဝါအားလုံး – မကောငျးသော နာမျတရားတို့ ကငျးစငျသှားခွငျး၊ မရှိတော့ခွငျးဖွငျ့ ကောငျးသော နာမျတရားတို့သာ နိဗ်ဗာနျတိုငျထိ အစားထိုးကာ ဆကျလကျဖွဈပှားနိုငျကွပါစေ။
၂၄။ အဝိဂတပစ်စယော –
သတ်တဝါအားလုံး – မကောငျးသော ရုပျနာမျတရားတို့ မကငျးသောအားဖွငျ့ မဖွဈပျေါကွဘဲ ကောငျးသော ရုပျနာမျတရားတို့သာ မကငျးကှာသောအားဖွငျ့ ဖွဈပျေါကွ၍ ကောငျးကြိုးအမြိုးမြိုးတို့သာ နိဗ်ဗာနျတိုငျထိ တိုးတကျဖွဈထှနျးနိုငျကွပါစေ။
အကြွေးပိနေသူများအတွက် … အကြွေးသံသရာတွင် နစ်မြုပ်နေလျှင်
မိတ်တွေတို့တွင် မြုပ်နေသော ငွေကြေး၊ အကြွေးပတ်လည်ဝိုင်းနေတာမျိုး ရှိလျှင်
အဆင်ပြေဖို့၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ပြန်ပေါ်လာ၊ ပြန်လည်ဦးမော့လာဖို့အတွက် ရှေးဆရာအစဉ်အဆက် ကုန်းဘောင်ခေတ်ကတည်းက လက်ဆင့်ကမ်း အသုံးပြုလာခဲ့တဲ့ ဓာတ်ယတြာနည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
မုန့်လုံးရေပေါ် ဆယ်ယတြာ ပြုလုပ်နည်း
(မုန့်လုံးရေပေါ်က အိုးထဲ ထည့်ခါစမှာ မြုပ်နေတယ်။ ကျက်မှ ပြန်ပေါ်လာတဲ့အတွက် မြုပ်နေတဲ့ အရာတွေ ပြန်ပေါ်လာစေတတ်တဲ့ ဓာတ်သဘောပဲ ဖြစ်ပါတယ်)
သင်၏ရောက်ဆဲ အသက်ကို ၄ ဖြင့် မြောက်ပါ။
ရသောအရေအတွက်ကို မုန့်လုံးရေပေါ် လုပ်ပါ။
ထိုအထဲမှာ မုန့်လုံးရေပေါ် ဆယ်လုံးကို အိမ်၏ဘုရားတွင် ကပ်လှူပါ။
သင်၏အသက်ကို (၇) ဖြင့်စားပါ။
၁ ကြွင်းလျှင် … တနင်္ဂနွေနေ့တွင် ပြုလုပ်ပါ။
၂ ကြွင်းလျှင် တနင်္လာနေ့တွင် ပြုလုပ်ပါ။
၃ ကြွင်းလျှင် အင်္ဂါနေ့တွင် ပြုလုပ်ပါ။
၄ ကြွင်းလျှင် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ပြုလုပ်ပါ
၅ ကြွင်းလျှင် ကြာသပတေးနေ့တွင် ပြုလုပ်ပါ
၆ ကြွင်းလျှင် သောကြာနေ့တွင် ပြုလုပ်ပါ
၀ ကြွင်းလျှင် စနေနေ့တွင် ပြုလုပ်ပါ။
မုန့်လုံးရေပေါ် (၁၀)လုံးတိတိကို မြတ်စွာဘုရားအား ကပ်လှူပြီးလျှင် ပိုသော မုန့်လုံးရေပေါ်များကို အိမ်နီးချင်းများအား ပေးဝေလိုက်ပါ။
အကွှေးပိနသေူမြားအတှကျ … အကွှေးသံသရာတှငျ နဈမွုပျနလြှေငျ
မိတျတှတေို့တှငျ မွုပျနသေော ငှကွေေး၊ အကွှေးပတျလညျဝိုငျးနတောမြိုး ရှိလြှငျ
အဆငျပွဖေို့၊ စီးပှားရေးလုပျငနျးမြား ပွနျပျေါလာ၊ ပွနျလညျဦးမော့လာဖို့အတှကျ ရှေးဆရာအစဉျအဆကျ ကုနျးဘောငျခတျေကတညျးက လကျဆငျ့ကမျး အသုံးပွုလာခဲ့တဲ့ ဓာတျယတွာနညျးတဈခုဖွဈပါတယျ။
မုနျ့လုံးရပေျေါ ဆယျယတွာ ပွုလုပျနညျး
(မုနျ့လုံးရပေျေါက အိုးထဲ ထညျ့ခါစမှာ မွုပျနတေယျ။ ကကျြမှ ပွနျပျေါလာတဲ့အတှကျ မွုပျနတေဲ့ အရာတှေ ပွနျပျေါလာစတေတျတဲ့ ဓာတျသဘောပဲ ဖွဈပါတယျ)
သငျ၏ရောကျဆဲ အသကျကို ၄ ဖွငျ့ မွောကျပါ။
ရသောအရအေတှကျကို မုနျ့လုံးရပေျေါ လုပျပါ။
ထိုအထဲမှာ မုနျ့လုံးရပေျေါ ဆယျလုံးကို အိမျ၏ဘုရားတှငျ ကပျလှူပါ။
သငျ၏အသကျကို (၇) ဖွငျ့စားပါ။
၁ ကွှငျးလြှငျ … တနင်ျဂနှနေတှေ့ငျ ပွုလုပျပါ။
၂ ကွှငျးလြှငျ တနင်ျလာနတှေ့ငျ ပွုလုပျပါ။
၃ ကွှငျးလြှငျ အင်ျဂါနတှေ့ငျ ပွုလုပျပါ။
၄ ကွှငျးလြှငျ ဗုဒ်ဓဟူးနတှေ့ငျ ပွုလုပျပါ
၅ ကွှငျးလြှငျ ကွာသပတေးနတှေ့ငျ ပွုလုပျပါ
၆ ကွှငျးလြှငျ သောကွာနတှေ့ငျ ပွုလုပျပါ
၀ ကွှငျးလြှငျ စနနေတှေ့ငျ ပွုလုပျပါ။
မုနျ့လုံးရပေျေါ (၁၀)လုံးတိတိကို မွတျစှာဘုရားအား ကပျလှူပွီးလြှငျ ပိုသော မုနျ့လုံးရပေျေါမြားကို အိမျနီးခငျြးမြားအား ပေးဝလေိုကျပါ။
( ၁၂ ) ရာသီဖွားများအတွက် ဆရာစံ ဇာဏီဘို ရဲ့ ( 26-1-2018 မှ 1-2-2018 ) ဟောစတမ်း
( ၁၂ ) ရာသီဖွားများအတွက်
ဆရာစံ ဇာဏီဘို ရဲ့
( 26-1-2018 မှ 1-2-2018 ) ဟောစတမ်း
ရင်းနှီးသောသူများနှင့် စကားများရမည်။ မိမိကိစ္စမဟုတ်ဘဲ ကိစ္စပို များ ကြုံမည်။ ငွေကြေး၊ စီးပွားတိုးတက်မှုရှိမည်။ အပြိုင်အဆိုင်ကြားမှ မိမိ လိုလားသည်များ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မည်။ ယာဉ်စက်ပစ္စည်းနှင့် ပတ်သက်၍ ငွေကုန်များမည်။ ရသင့်လျက် ကြန့်ကြာနေသည်များ အဆင်ပြေသွားမည်။ မေတ္တာရေးအညံ့ရှိသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတိုးတက်မည်။ ရည်မှန်းချက်သစ်များ အောင်မြင်မည်။ ယတြာ ။ ။ အင်္ဂါနေ့တွင် ဆပ်ပြာခွက်အသစ် အစားထိုးသုံးစွဲပါ။
အကောင်းအဆိုး ရောထွေးနေသောကာလဖြစ်သည်။ အရာရာ ချော ချောမောမော မရှိ။ ဦးတည်လိုက်တိုင်း နေရာတိုင်းအခက်အခဲရှိပြီးမှ အဆင် ပြေမည်။ ငွေကုန်များမည်။ ပဋိပက္ခများ ရှိမည်။ အထင်လွဲခံရခြင်း များ ဖြေရှင်းရမည်။ သတင်းဆိုးများ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ကြုံမည်။ မိမိရည်မှန်းထားသည့် ငွေဝင်လမ်းများ ကြန့်ကြာနေမည်။ မိတ်ကောင်းဆွေကောင်း အကူအညီရမည်။ ပညာရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ကောင်းသောကာလ ဖြစ်သည်။ စီးပွားရေးတွင် မထင်မှတ်ထားသော ပစ္စည်းမှ အမြတ်ရမည်။ ယတြာ ။ ။ သောကြာနေ့တွင် သံပရာသီးကိုးလုံး ဘုရားကပ်လှူပါ။
ကံဇာတာတက်လမ်းပွင့်သည်။ အလုပ်အကြံသစ် အောင်မြင်မည်။ မိတ်ဆွေသစ် တိုးပွားမည်။ မိမိအခက်အခဲများ ကျော်လွှားပပျောက်မည်။ ရည်မှန်းချက်သစ်များ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မည်။ မှန်းသည်နှင့် လက်တွေ့ ကွာဟလင့်ကစား တစ်စတစ်စအဆင်ပြေမည်။ ကျန်းမာ ရေး ယာယီ အညံ့ရှိမည်။ စိတ်ပင်ပန်း လူပင်ပန်းဖြစ်ပြီး လိုရာပြည့်စုံမည်။ ပဋိပက္ခများ အေးချမ်းသွားမည်။ မေတ္တာရေး ကံကောင်းသည်။
ယတြာ ။ ။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ဘုရားတွင် ယပ်ဖြူတစ်လက်လှူဒါန်းပါ။
အဘက်ဘက်မှ ကောင်းသောကာလဖြစ်သည်။ ရည်ရွယ်ချက် အောင် မြင်မည်။ ပညာ၊ လုပ်ငန်းတွဲလျက် ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ မိမိလိုလားချက် များ ပြည့်ဝအောင်မြင်မည်။ အခက်အခဲများကြုံပြီး ဘက်စုံ အဆင်ပြေ သော အနေအထားသို့ ဦးတည်မည်။ မိမိအပေါ် အထင်လွဲနေသည်များ ပပျောက်မည်။ စီးပွားရေးကိစ္စများ အထူးအဆင်ပြေမည်။ ခရီးနှင့်ပတ် သက်သောကံ ကောင်း၏။ အရပ်ဝေးမှ စာ၊ လက်ဆောင်ပစ္စည်းများ လက် ခံရရှိမည်။ ပျိုရွယ်သူများ စန်းပွင့်မည်။ ယတြာ ။ ။ တနင်္လာနေ့တွင် ကြာပန်းဘုရားတင်ပါ။
စာရွက်စာတမ်းကိစ္စ ပြောဆိုမှု အောင်မြင်မည်။ ပြောင်းလဲလုပ်ကိုင် ခြင်းမှ တိုးတက်မှုရမည်။ ပြဿနာဟောင်းများ ပြန်လည်ဖြေရှင်းနိုင်မည်။ အခက်အခဲများကို ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင် ဖြေရှင်းရမည်။ လူယုံမထားရ။ အရာရာ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ဆောင်ရွက်သင့်သည်။ သူတစ်ပါးအပေါ် ယုံကြည် လွှဲအပ်၍ ဆောင်ရွက်သောကိစ္စတို့မှ ပြဿနာအခက်အခဲများ စတင် ဖြစ် တတ်သည်။ စကား၊ ကတိ မတည်သောသူများနှင့် တွေ့တတ်သည်။ ယတြာ ။ ။ တနင်္ဂနွေနေ့တွင် အုန်းသီးခြောက်စိတ် ဘုရားကပ်လှူပါ။
အခက်အခဲတို့ကို ကျော်လွှား၍ အလုပ်အကြံအစည် ရည်ရွယ်ချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မည်။ မေတ္တာရေးကံကောင်းမည်။ မိတ်ကောင်းဆွေကောင်း အထောက်အကူရမည်။ ဦးတည်ချက်သစ်နှင့် ဆောင်ရွက်ခြင်းမှ အဆင့်မြင့်တက်လမ်းရရှိမည်။ ငွေကြေးနှင့်ပတ်သက် သောကံကောင်းမည်။ လုပ်ကိုင်နေသောအလုပ်ကိစ္စတို့မှ ထူးခြားသော အကျိုးဆက်ရရှိမည်။ အတွေ့အကြုံသစ်များနှင့် ဘဝတိုးတက်မှုတို့ ပေါင်း စည်း ဖြစ်ပေါ်မည်။ ယတြာ ။ ။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ဝါးဆစ်နှင့်ပြုလုပ်ထား သော ပန်းအိုးအတွင်း ပန်းအလှထိုးထားပါ။
မမျှော်လင့်ဘဲ ရရှိလာသော အခွင့်အရေးနှင့် ဆက်နွှယ်သော အပြောင်းအလဲမှ ခရီးကံပေါ်မည်။ လူမျိုးကွဲ အကျိုးပေးမည်။ အိမ်ရှိ အသက်အရွယ်အကြီး ဆုံး အမျိုးသမီး၏ကျန်းမာရေး အညံ့ရှိမည်။ အိမ်တွင်းရေး ပဋိပက္ခများနှင့် ကြုံမည်။ ပစ္စည်းပျောက်မည်။စကား၊ ကတိမတည်သူများ နှင့် တွေ့မည်။ ယတြာ ။ ။ သောကြာနေ့တွင် သစ်သီးအလှူဒါနပြုပါ။
ရည်ရွယ်ချက် အောင်မြင်မည်။ ဆောင်ရွက်သမျှ ထွန်းပေါက်မည်။ အခက်အခဲများကျော်လွှားနိုင်မည်။ နှောင့်ယှက်ယှဉ်ပြိုင်နေသူအားလုံးအား အနိုင်ရရှိမည်။ အကြံသစ်အောင်မည်။ တစ်ပြိုင်နက်တည်း အလုပ်အကြံ အစည် နှစ်မျိုးကို ဆောင်ရွက်နိုင်မည်။ ငွေဝင်မည်။ အလုပ်တိုးတက်မည်။ မူလအနေအထားမှ ပိုမိုမြင့်မားသောအဆင့်သို့ တိုးတက်မည်။ အချစ်ရေး ကံကောင်းသည်။ အရပ်ဝေးနှင့်ဆက်သွယ်၍ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သည် တို့မှ အကျိုးအမြတ်ရမည်။ ယတြာ ။ ။ အင်္ဂါနေ့တွင် စပျစ်သီးပုံ သို့မဟုတ် အရုပ်ကို အနီးအပါးတွင်ထားပါ။
ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် တိုးတက်မှုကို ဖန်တီးနိုင်သည်။ ခက်ခဲသောပြဿ နာများ ဖြေရှင်းနိုင်မည်။ နေရာသစ် ဝန်းကျင်သစ်နှင့် ဆက်ဆံ၍ အောင်မြင် တိုးတက်မည်။ စတင်ဆောင်ရွက်လိုက်သောကိစ္စတို့မှ ထူးခြားသော အနာ ဂါတ်ကို ရမည်။ ပညာသင်တန်းတက်ရောက်ရခြင်းရှိမည်။ အလုပ်နေရာ၊ နေအိမ်နေရာ အပြောင်းအလဲများ ရှိမည်။ အရပ်ဝေးမှ ကောင်းသော သ တင်းစကားများကို ကြားသိရလိမ့်မည်။ တစ်ပါးသူ၏ဝေဖန်မှုနှင့် အကြံ ဉာဏ်ပေးမှုကို လက်ခံပါ။ ယတြာ ။ ။ ကြာသပတေးနေ့တွင် ပိုက်ဆံအိတ် အသစ်ဝယ်ယူသုံးစွဲပါ။
အပိတ်အဆို့ အတားအဆီးများကို ကျော်လွှား၍ အဆင့်မြင့်တက် လမ်းများ ဖြစ်ပေါ်မည်။ ငွေကြေးကံကောင်းမည်။ အခက်အခဲများ ကျော်လွှားနိုင်မည်။ အမှုကိစ္စများ အောင်မြင်မည်။ တစ်ဖက်သတ် အနိုင်ယူဆုံး ဖြတ်သည့်ကိစ္စများကို ပြန်လည်ရင်ဆိုင်၍ အနိုင်ရရှိ မည်။ တိုင်းတစ်ပါးမှ ကောင်းသောသတင်းစကား ရရှိမည်။ အလုပ်နှင့် အ ပြောင်းအလဲများ ပူးတွဲဖြစ်ပေါ်မည်။ နာတာရှည်ရောဂါသည်များ သမားကောင်းတွေ့မည်။ ယတြာ ။ ။ စနေနေ့တွင် ဆနွင်းမကင်း ဘုရားကပ်လှူ ပါ။
ဆန္ဒနှင့် ရည်မှန်းချက်တို့ကို လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်နိုင် မည်။ ဘဝအခြေအနေတိုးတက်မည်။ လူမျိုးကွဲ အကျိုးပေးမည်။ အရပ်ဝေးနှင့် ဆက်စပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းမှ အဆင့်မြင့်တက်လမ်း ပေါ်မည်။ ငွေကြေးအပေးအယူကိစ္စ၊ လူမှုရေးကိစ္စတို့တွင် ဖြစ်ပေါ်သောပြဿနာများ ဖြေရှင်းနိုင်မည်။ အလုပ်အဆင့်တိုးတက်မည်။ ငွေကြေးဥစ္စာတိုးပွားမည်။ အိမ်တွင် စာသင်သားများရှိက ပညာရေးကောင်းမည်။ ယတြာ ။ ။ စနေနေ့တွင် တောင်အရပ်ကို မျက်နှာမူ၍ ဖယောင်းတိုင်ထွန်းပါ။
ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီး ရှေ့တိုးလုပ်သောကိစ္စများမှ ထူးခြားသော အောင်မြင်မှုများရမည်။ ကြိုတင်တွက်ဆ၍မရသော အနာဂတ်ကို ဖြတ် သန်းနေရမည်။ ပညာရေးကောင်းမည်။ ရည်ရွယ်ချက် အောင်မြင်မည်။ ဆုံးဖြတ်ပြီး ဆောင်ရွက်သောကိစ္စမှ အဆင့်မြင့် အကျိုးခံစားရရှိမည်။ အကုန်အကျခံပြီး ဆောင်ရွက်ထားသောကိစ္စတို့မှ ထူးခြားသောအကျိုးဆက် ရရှိမည်။ ကျန်းမာရေးအညံ့ရှိသည်။ ဂရုစိုက်ပါ။ ယတြာ ။ ။ ကြာသပတေးနေ့တွင် ပရိဘောဂများ နေရာအထားအသိုပြောင်းပါ။
စံ – ဇာဏီဘို
( ၁၂ ) ရာသီဖှားမြားအတှကျ
ဆရာစံ ဇာဏီဘို ရဲ့
( 26-1-2018 မှ 1-2-2018 )
ရငျးနှီးသောသူမြားနှငျ့ စကားမြားရမညျ။ မိမိကိစ်စမဟုတျဘဲ ကိစ်စပို မြား ကွုံမညျ။ ငှကွေေး၊ စီးပှားတိုးတကျမှုရှိမညျ။ အပွိုငျအဆိုငျကွားမှ မိမိ လိုလားသညျမြား အကောငျအထညျဖျောနိုငျမညျ။ ယာဉျစကျပစ်စညျးနှငျ့ ပတျသကျ၍ ငှကေုနျမြားမညျ။ ရသငျ့လကျြ ကွနျ့ကွာနသေညျမြား အဆငျပွသှေားမညျ။ မတ်ေတာရေးအညံ့ရှိသညျ။ စီးပှားရေးလုပျငနျးတိုးတကျမညျ။ ရညျမှနျးခကျြသဈမြား အောငျမွငျမညျ။ ယတွာ ။ ။ အင်ျဂါနတှေ့ငျ ဆပျပွာခှကျအသဈ အစားထိုးသုံးစှဲပါ။
အကောငျးအဆိုး ရောထှေးနသေောကာလဖွဈသညျ။ အရာရာ ခြော ခြောမောမော မရှိ။ ဦးတညျလိုကျတိုငျး နရောတိုငျးအခကျအခဲရှိပွီးမှ အဆငျ ပွမေညျ။ ငှကေုနျမြားမညျ။ ပဋိပက်ခမြား ရှိမညျ။ အထငျလှဲခံရခွငျး မြား ဖွရှေငျးရမညျ။ သတငျးဆိုးမြား တဈခုပွီးတဈခု ကွုံမညျ။ မိမိရညျမှနျးထားသညျ့ ငှဝေငျလမျးမြား ကွနျ့ကွာနမေညျ။ မိတျကောငျးဆှကေောငျး အကူအညီရမညျ။ ပညာရေးနှငျ့ပတျသကျ၍ ကောငျးသောကာလ ဖွဈသညျ။ စီးပှားရေးတှငျ မထငျမှတျထားသော ပစ်စညျးမှ အမွတျရမညျ။ ယတွာ ။ ။ သောကွာနတှေ့ငျ သံပရာသီးကိုးလုံး ဘုရားကပျလှူပါ။
ကံဇာတာတကျလမျးပှငျ့သညျ။ အလုပျအကွံသဈ အောငျမွငျမညျ။ မိတျဆှသေဈ တိုးပှားမညျ။ မိမိအခကျအခဲမြား ကြျောလှားပပြောကျမညျ။ ရညျမှနျးခကျြသဈမြား အကောငျအထညျဖျောနိုငျမညျ။ မှနျးသညျနှငျ့ လကျတှေ့ ကှာဟလငျ့ကစား တဈစတဈစအဆငျပွမေညျ။ ကနျြးမာ ရေး ယာယီ အညံ့ရှိမညျ။ စိတျပငျပနျး လူပငျပနျးဖွဈပွီး လိုရာပွညျ့စုံမညျ။ ပဋိပက်ခမြား အေးခမျြးသှားမညျ။ မတ်ေတာရေး ကံကောငျးသညျ။
ယတွာ ။ ။ ဗုဒ်ဓဟူးနတှေ့ငျ ဘုရားတှငျ ယပျဖွူတဈလကျလှူဒါနျးပါ။
အဘကျဘကျမှ ကောငျးသောကာလဖွဈသညျ။ ရညျရှယျခကျြ အောငျ မွငျမညျ။ ပညာ၊ လုပျငနျးတှဲလကျြ ဆောငျရှကျနိုငျသညျ။ မိမိလိုလားခကျြ မြား ပွညျ့ဝအောငျမွငျမညျ။ အခကျအခဲမြားကွုံပွီး ဘကျစုံ အဆငျပွေ သော အနအေထားသို့ ဦးတညျမညျ။ မိမိအပျေါ အထငျလှဲနသေညျမြား ပပြောကျမညျ။ စီးပှားရေးကိစ်စမြား အထူးအဆငျပွမေညျ။ ခရီးနှငျ့ပတျ သကျသောကံ ကောငျး၏။ အရပျဝေးမှ စာ၊ လကျဆောငျပစ်စညျးမြား လကျ ခံရရှိမညျ။ ပြိုရှယျသူမြား စနျးပှငျ့မညျ။ ယတွာ ။ ။ တနင်ျလာနတှေ့ငျ ကွာပနျးဘုရားတငျပါ။
စာရှကျစာတမျးကိစ်စ ပွောဆိုမှု အောငျမွငျမညျ။ ပွောငျးလဲလုပျကိုငျ ခွငျးမှ တိုးတကျမှုရမညျ။ ပွဿနာဟောငျးမြား ပွနျလညျဖွရှေငျးနိုငျမညျ။ အခကျအခဲမြားကို ထိပျတိုကျရငျဆိုငျ ဖွရှေငျးရမညျ။ လူယုံမထားရ။ အရာရာ ကိုယျတိုငျကိုယျကြ ဆောငျရှကျသငျ့သညျ။ သူတဈပါးအပျေါ ယုံကွညျ လှဲအပျ၍ ဆောငျရှကျသောကိစ်စတို့မှ ပွဿနာအခကျအခဲမြား စတငျ ဖွဈ တတျသညျ။ စကား၊ ကတိ မတညျသောသူမြားနှငျ့ တှတေ့တျသညျ။ ယတွာ ။ ။ တနင်ျဂနှနေတှေ့ငျ အုနျးသီးခွောကျစိတျ ဘုရားကပျလှူပါ။
အခကျအခဲတို့ကို ကြျောလှား၍ အလုပျအကွံအစညျ ရညျရှယျခကျြမြားကို အကောငျအထညျဖျောနိုငျမညျ။ မတ်ေတာရေးကံကောငျးမညျ။ မိတျကောငျးဆှကေောငျး အထောကျအကူရမညျ။ ဦးတညျခကျြသဈနှငျ့ ဆောငျရှကျခွငျးမှ အဆငျ့မွငျ့တကျလမျးရရှိမညျ။ ငှကွေေးနှငျ့ပတျသကျ သောကံကောငျးမညျ။ လုပျကိုငျနသေောအလုပျကိစ်စတို့မှ ထူးခွားသော အကြိုးဆကျရရှိမညျ။ အတှအေ့ကွုံသဈမြားနှငျ့ ဘဝတိုးတကျမှုတို့ ပေါငျး စညျး ဖွဈပျေါမညျ။ ယတွာ ။ ။ ဗုဒ်ဓဟူးနတှေ့ငျ ဝါးဆဈနှငျ့ပွုလုပျထား သော ပနျးအိုးအတှငျး ပနျးအလှထိုးထားပါ။
မမြှျောလငျ့ဘဲ ရရှိလာသော အခှငျ့အရေးနှငျ့ ဆကျနှယျသော အပွောငျးအလဲမှ ခရီးကံပျေါမညျ။ လူမြိုးကှဲ အကြိုးပေးမညျ။ အိမျရှိ အသကျအရှယျအကွီး ဆုံး အမြိုးသမီး၏ကနျြးမာရေး အညံ့ရှိမညျ။ အိမျတှငျးရေး ပဋိပက်ခမြားနှငျ့ ကွုံမညျ။ ပစ်စညျးပြောကျမညျ။စကား၊ ကတိမတညျသူမြား နှငျ့ တှမေ့ညျ။ ယတွာ ။ ။ သောကွာနတှေ့ငျ သဈသီးအလှူဒါနပွုပါ။
ရညျရှယျခကျြ အောငျမွငျမညျ။ ဆောငျရှကျသမြှ ထှနျးပေါကျမညျ။ အခကျအခဲမြားကြျောလှားနိုငျမညျ။ နှောငျ့ယှကျယှဉျပွိုငျနသေူအားလုံးအား အနိုငျရရှိမညျ။ အကွံသဈအောငျမညျ။ တဈပွိုငျနကျတညျး အလုပျအကွံ အစညျ နှဈမြိုးကို ဆောငျရှကျနိုငျမညျ။ ငှဝေငျမညျ။ အလုပျတိုးတကျမညျ။ မူလအနအေထားမှ ပိုမိုမွငျ့မားသောအဆငျ့သို့ တိုးတကျမညျ။ အခဈြရေး ကံကောငျးသညျ။ အရပျဝေးနှငျ့ဆကျသှယျ၍ လုပျကိုငျဆောငျရှကျသညျ တို့မှ အကြိုးအမွတျရမညျ။ ယတွာ ။ ။ အင်ျဂါနတှေ့ငျ စပဈြသီးပုံ သို့မဟုတျ အရုပျကို အနီးအပါးတှငျထားပါ။
ပွောငျးလဲခွငျးနှငျ့ တိုးတကျမှုကို ဖနျတီးနိုငျသညျ။ ခကျခဲသောပွဿ နာမြား ဖွရှေငျးနိုငျမညျ။ နရောသဈ ဝနျးကငျြသဈနှငျ့ ဆကျဆံ၍ အောငျမွငျ တိုးတကျမညျ။ စတငျဆောငျရှကျလိုကျသောကိစ်စတို့မှ ထူးခွားသော အနာ ဂါတျကို ရမညျ။ ပညာသငျတနျးတကျရောကျရခွငျးရှိမညျ။ အလုပျနရော၊ နအေိမျနရော အပွောငျးအလဲမြား ရှိမညျ။ အရပျဝေးမှ ကောငျးသော သ တငျးစကားမြားကို ကွားသိရလိမျ့မညျ။ တဈပါးသူ၏ဝဖေနျမှုနှငျ့ အကွံ ဉာဏျပေးမှုကို လကျခံပါ။ ယတွာ ။ ။ ကွာသပတေးနတှေ့ငျ ပိုကျဆံအိတျ အသဈဝယျယူသုံးစှဲပါ။
အပိတျအဆို့ အတားအဆီးမြားကို ကြျောလှား၍ အဆငျ့မွငျ့တကျ လမျးမြား ဖွဈပျေါမညျ။ ငှကွေေးကံကောငျးမညျ။ အခကျအခဲမြား ကြျောလှားနိုငျမညျ။ အမှုကိစ်စမြား အောငျမွငျမညျ။ တဈဖကျသတျ အနိုငျယူဆုံး ဖွတျသညျ့ကိစ်စမြားကို ပွနျလညျရငျဆိုငျ၍ အနိုငျရရှိ မညျ။ တိုငျးတဈပါးမှ ကောငျးသောသတငျးစကား ရရှိမညျ။ အလုပျနှငျ့ အ ပွောငျးအလဲမြား ပူးတှဲဖွဈပျေါမညျ။ နာတာရှညျရောဂါသညျမြား သမားကောငျးတှမေ့ညျ။ ယတွာ ။ ။ စနနေတှေ့ငျ ဆနှငျးမကငျး ဘုရားကပျလှူ ပါ။
ဆန်ဒနှငျ့ ရညျမှနျးခကျြတို့ကို လကျတှအေ့ကောငျအထညျဖျောနိုငျ မညျ။ ဘဝအခွအေနတေိုးတကျမညျ။ လူမြိုးကှဲ အကြိုးပေးမညျ။ အရပျဝေးနှငျ့ ဆကျစပျလုပျကိုငျခွငျးမှ အဆငျ့မွငျ့တကျလမျး ပျေါမညျ။ ငှကွေေးအပေးအယူကိစ်စ၊ လူမှုရေးကိစ်စတို့တှငျ ဖွဈပျေါသောပွဿနာမြား ဖွရှေငျးနိုငျမညျ။ အလုပျအဆငျ့တိုးတကျမညျ။ ငှကွေေးဥစ်စာတိုးပှားမညျ။ အိမျတှငျ စာသငျသားမြားရှိက ပညာရေးကောငျးမညျ။ ယတွာ ။ ။ စနနေတှေ့ငျ တောငျအရပျကို မကျြနှာမူ၍ ဖယောငျးတိုငျထှနျးပါ။
ခကျြခငျြးဆုံးဖွတျပွီး ရှတေို့းလုပျသောကိစ်စမြားမှ ထူးခွားသော အောငျမွငျမှုမြားရမညျ။ ကွိုတငျတှကျဆ၍မရသော အနာဂတျကို ဖွတျ သနျးနရေမညျ။ ပညာရေးကောငျးမညျ။ ရညျရှယျခကျြ အောငျမွငျမညျ။ ဆုံးဖွတျပွီး ဆောငျရှကျသောကိစ်စမှ အဆငျ့မွငျ့ အကြိုးခံစားရရှိမညျ။ အကုနျအကခြံပွီး ဆောငျရှကျထားသောကိစ်စတို့မှ ထူးခွားသောအကြိုးဆကျ ရရှိမညျ။ ကနျြးမာရေးအညံ့ရှိသညျ။ ဂရုစိုကျပါ။ ယတွာ ။ ။ ကွာသပတေးနတှေ့ငျ ပရိဘောဂမြား နရောအထားအသိုပွောငျးပါ။
25.1.2018 မှ 31.1.2018 အထိ
ဒီအချိန်က ကျန်းမာရေးအတွက်ဂရုစိုက်စေချင်ပါတယ်။ နေမထိထိုင်မသာ ဖြစ်ပြီဆိုကတည်းကမပေါ့သင့်ပါဘူး။ ဆေးမြီးတိုနဲ့ မကုသင့်တဲ့ ကာလပါပဲ။နေရာထိုင်ခင်းအပြောင်းအလဲများကြုံတွေ့ရခြင်း ၊အလုပ်အပြောင်းအလဲများကြုံရခြင်းတွေလဲဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ ဖခင်ရဲ့ ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်ပါ။ လူကြီးတွေ မိမိအပေါ် ငြို ငြင်တာမျိုး မဖြစ်ပါစေနဲ့။ အလုပ်ကံမဆိုးပါ။ အလုပ်များနေပါလိမ့်မယ်။ အလုပ်တော့ များပါရဲ့ ငွေကတော့ ထင်သလောက်မဝင်ဘူးပေါ့လေ။ အချစ်ရေးကံကတော့ အလွန်ကောင်းနေချိန်ပဲဗျ။ ချစ်သူသစ်ရခြင်း ၊ချစ်သူက တန်ဖိုးထားစရာလက်ဆောင်ပေးခြင်းမျိုးလဲ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ ပညာရေးကံကတော့ မိမိအနေနဲ့အချိန်ပေးဖို့လိုပါတယ်။အခြားဗာဟီရတွေလုပ်နေရတာကြောင့် စာကျက်ချိန်လျော့သွားတတ်လို့ပါ။
ယတြာ အုန်းသီးပါသောမုန့်များ ဘုရားရှင်အားလှူဒါန်းပေးပါ။
ဒီရက်ထဲ ကံကြမ္မာကမိမိဘက်မှာ ရပ်တည်နေပါတယ်။ လုပ်ကိုင်သမျှ ကြံစည်သမျှ အောင်မြင်ထွန်းပေါက်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေပါလိမ့်မယ်။ ငွေကြေးကံလဲမြင့်မားနေချိန်ပါပဲ။ လာဘ်ရွှင်မဲ့ကာလလို့ပဲ ယေဘုယျသုံးသပ်ရမှာပါ။ရစရာရှိတဲ့ ငွေကြေးတွေရလာပါလိမ့်မယ်။ မှန်းထားသည်ထက်ငွေပိုဝင်ပါလိမ့်မယ်။ ကျန်းမာရေးလဲအညံ့အဆိုးကင်းနေပါလိမ့်မယ်။စန်းပွင့်နေမဲ့ကာလပါ။မိမိကို purpose လုပ်မဲ့သူတွေရှိလာပါလိမ့်မယ်။ အလုပ်အကိုင်ကတော့ အရမ်းအကောင်းကြီးမဟုတ်ပါဘူး။ခပ်ပါးပါးပါပဲ။ ပရဟိတအလုပ်တွေနဲ့အချိန်ကုန်နေရလိမ့်မယ်။ ပညာရေးထူးချွန်မှာပါ။ သင်လွယ်တတ်လွယ်ပြီး ဉာဏ်ပွင့်မဲ့ ကာလမို့ပါပဲ။
ယတြာ ကော်ဖီနဲ့ ကိတ်မုန့် ဘုရားကပ်လှူပါ
ဒီကာလအတွင်းခရီးတိုတွေ ခဏခဏသွားရတတ်ပါတယ်။အဝေးကြီးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီကာလအတွင်း စိတ်မြန်လက်မြန်လုပ်ခြင်းကလဲ လမိးကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်သွားတတ်ပါတယ်။ ငွေကံမညံ့ပါဘူး။ အလုပ်ကောင်းနေတော့ ငွေကံလဲကောင်းနေတတ်ပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင်အလုပ်များအားလုံး ဒီကာလအတွင်း ကောင်းပါလိမ့်မယ်။ ရောင်းပန်းဝယ်ပန်းတွေပွင့်လိမ့်မယ်။ လုပ်ငန်းချဲ့ထွင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အချစ်ရေးကတော့ အပြင်မှာထက် onlineပေါ်ကနေ ချစ်သူတွေ့တတ်ပါတယ်။ လေလှိုင်းထဲမှာ အဆင်ပြေမဲ့ အချစ်ရေးပါပဲ။ ကျန်းမာရေးကတော့ အစာမကြေတာ ရင်ပြည့်တာမျိုးတွေလဲဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အစာကြေဆေး ဆောင်ထားပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။ပညာရေးကံကလဲ စူးစမ်းလိုစိတ်နဲ့ သိလိုစိတ်ပြင်းထန်တဲ့ကာလဖြစ်တော့ မိမိသာအာရုံစိုက်ထားမယ်ဆို အကောင်းဆုံးပါပဲ
လိုသလောက်မရပေမဲ့ လုပ်သလောက်တော့ ရမှာပါ။ ဒီကာလထဲ ကံကြမ္မာကမျက်နှာသာမပေးပါဘူး။မိမိဉာဏ်နဲ့ ဝီရိယကိုသာ စိုက်ထုတ်ရပါလ်ိမ့်မယ်။ မိမိကို မနာလိုသူတွေ ဝန်းရံနေတတ်ပါတယ်။
မိမိကို ချောက်ချမဲ့သူတွေရှိနေတတ်ပါတယ်။ မိမိအနေအထိုင် အပြောအဆိုဆင်ခြင်ပါ။ အိမ်ထောင်သည်ဆို အိမ်တွင်းရေးသောက ကြုံရနိုင်ပါတယ်။
လင်ကတစ်မျိုး သားကတစ်မျိုးဆိုသလိုပေါ့ဗျာ။ ရွှေငွေလက်ဝတ်ရတနာများ အထားမှားပြီး ပျောက်ရှတတ်ပါတယ်။ ရပ်ဝေးက ဒုက္ခပေးမဲ့သူတွေ အိမ်ရောက်လာတတ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးကတော့ ဒေါင်ဒေါင်မြည်ပါပဲ။ အညံ့အဆိုးတွေမတွေ့ရပါဘူး။ အချစ်ရေးကံကောင်းမှာပါ။ ညံ့နေတာက ပညာရေးပါ၊
မိမိကိုယ်တိုင်က ပညာရေးအပေါ် စိတ်ဝင်စားမှုနည်းနေတတ်ပါတယ်။
ယတြာ ကံ့ကော် ၁၅ညွှန့် ဘုရားလှူပါ
ဒီကာလက မိမိအတွက် ကြီးမားတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်ရဖို့ကြုံလာရတတ်ပါတယ်။ ဆုံးဖြတ်ချက်မှားတာနဲ့ နောင်လာမဲ့ အကျိုးဆက်တွေမကောင်းနိုင်ပါဘူး။ သူများတိုက်တွန်းတာထက် မိမိမှန်တယ်ထင်တာကို ရွေးချယ်ခြင်းကပိုကောင်းပါတယ်။ ဥပဒေနဲ့ မလွတ်ကင်းတဲ့ စီးပွားရေးများ အရေးယူခြင်းခံရပါလိမ့်မယ်။ ရိုးသားပါ ။မိခင်ကျန်းမာရေးအထူးဂရုစိုက်ပါလို့ မှာချင်ပါတယ်။ ငွေကြေးရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေမှားတတ်ပါတယ်။ ကြွေးယူခြင်း ကြွေးတောင်းခြင်းတွေမလုပ်ပါနဲ့ ။ အလုပ်တိုးတတ်ပေမဲ့ အလုပ်ချဲ့ဖို့ ငွေလိုနေတတ်ပါတယ်။ မိမိကျန်းမာရေးကတော့ ပူပင်စရာမရှိပါဘူး။ မတ်တပ်ဖျား မတ်တပ်နာလောက်ပါပဲ။ ပုံမှန်မဟုတ်တာက အချစ်ရေးပါ။ မလွတ်လပ်သူနဲ့ ငြိစွန်းလွယ်ပါတယ်။ ပညာရေးကတော့ အလွန်ကောင်းတယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။
ယတြာ ဇီးချိုသီး ၈လုံး ဘုရားကပ်လှူပါ
ဒီကာလဟာ လုပ်ချင်တာလေးတွေ ကြံစည်ထားတာလေးတွေအကောင်အထည်ဖော်နိုင်မဲ့ကာလပါပဲ။ အထူးသဖြင့်အလုပ်စီးပွားအထူးတိုးတတ်ပါလိမ့်မယ်။ နိုင်ငံရပ်ခြားကိစ္စ၊ လူမျိုးခြားဘာသာခြားတွေနှင့်ဆက်သွယ်လုပ်ကိုင်ရသောကိစ္စတွေမှာ အထူးအကျိုးဖြစ်ထွန်းပါလိမ့်မယ်။ စက်ပစ္စည်းအသစ်တွေဝယ်လို့ အကောင်းဆုံးကာလပါပဲ။ အောက်လက်ငယ်သားတွေနဲ့ တိုင်တိုင်ပင်ပင် လုပ်ကိုင်ပါ။ ရစရာရှိတဲ့အရာများ ကြန့်ကြာနေတာမျိုးကြုံရရင်လဲ
ဒီကာလမှာပြန်လည်ရရှိလာပါလိမ့်မယ်။ ရပ်ဝေးကမိတ်ဆွေတွေရဲ့အကူအညီတွေ လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေရလာပါလိမ့်မယ်။ ကျန်းမာရေးအနေနဲ့ အအေးမိတာမျိုး ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ရေချိုးတာချင့်ချိန်တတ်ဖို့လိုပါတယ်။
ပညာရေးကံကတော့သင့်ရုံပါပဲ။ အချစ်ရေးကံက အခန့်မသင့်ရင် ချစ်သူနဲ့ လမ်းခွဲရသည်ထိ ညံ့နေပါတယ်။
ယတြာ ဘုရားရှင်အား သံပုရာရည် ၄ခွက်ကပ်လှူပါ
အရာရာတိုင်းကို စဉ်းစားချင့်ချိန်ပြီးမှလုပ်ပါ။ အလောတကြီးလုပ်လေအမှားများပြီး နှစ်ခါပြန်လုပ်ရလေပါပဲ။ ဒီအပတ်ထဲ အခြားအချင်းအရာထက် ကျန်းမာရေးကိုပိုဂရုစိုက်ပါ။ ကျန်းမာရေးဒေါင်ဒေါင်မြည်နေသူတောင်မှ ဒီကာလအတွင်းခြူ ခြာလွယ်ပါတယ်။ ငွေကြေးနဲ့ပက်သက်ပြီးတော့ စိတ်ညစ်စရာကြုံလာနိုင်တဲ့အခိုက်အတန့်ပါပဲ။ ငွေကြေးကို စနစ်တကျသုံးစွဲသင့်တဲ့ကာလပါ။ ဒီကာလမှာ အလုပ်နဲ့ပက်သက်၍ဖြစ်စေ၊ အခြားကိစ္စကြောင့်ဖြစ်စေ အပြောင်းအလဲတစ်စုံတစ်ရာမလုပ်တာအကောင်းဆုံးပါပဲ။ ပညာရေးကံအညံ့ဆုံးကာလထဲရောက်နေပါတယ်။ ပညာရေးကို စိတ်နှစ်ထားနိုင်မှအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ အချစ်ရေးကိစ္စတွေမှာ နားလည်မှုတွေပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်မှာပါ။ ချစ်သူနှစ်ဦးလျှောက်မဲ့လမ်း ပန်းခင်းသောလမ်းဖြစ်နေမဲ့အချိန်ပါ။
ယတြာ ဒံပေါက်ဆွမ်း ဘုရားရှင်အား ကပ်လှူပါ၊
25.1.2018 မှ 31.1.2018 အထိ
ဒီအခြိနျက ကနျြးမာရေးအတှကျဂရုစိုကျစခေငျြပါတယျ။ နမေထိထိုငျမသာ ဖွဈပွီဆိုကတညျးကမပေါ့သငျ့ပါဘူး။ ဆေးမွီးတိုနဲ့ မကုသငျ့တဲ့ ကာလပါပဲ။နရောထိုငျခငျးအပွောငျးအလဲမြားကွုံတှရေ့ခွငျး ၊အလုပျအပွောငျးအလဲမြားကွုံရခွငျးတှလေဲဖွဈရတတျပါတယျ။ ဖခငျရဲ့ ကနျြးမာရေးဂရုစိုကျပါ။ လူကွီးတှေ မိမိအပျေါ ငွို ငွငျတာမြိုး မဖွဈပါစနေဲ့။ အလုပျကံမဆိုးပါ။ အလုပျမြားနပေါလိမျ့မယျ။ အလုပျတော့ မြားပါရဲ့ ငှကေတော့ ထငျသလောကျမဝငျဘူးပေါ့လေ။ အခဈြရေးကံကတော့ အလှနျကောငျးနခြေိနျပဲဗြ။ ခဈြသူသဈရခွငျး ၊ခဈြသူက တနျဖိုးထားစရာလကျဆောငျပေးခွငျးမြိုးလဲ ကွုံရတတျပါတယျ။ ပညာရေးကံကတော့ မိမိအနနေဲ့အခြိနျပေးဖို့လိုပါတယျ။အခွားဗာဟီရတှလေုပျနရေတာကွောငျ့ စာကကျြခြိနျလြော့သှားတတျလို့ပါ။
ယတွာ အုနျးသီးပါသောမုနျ့မြား ဘုရားရှငျအားလှူဒါနျးပေးပါ။
ဒီရကျထဲ ကံကွမ်မာကမိမိဘကျမှာ ရပျတညျနပေါတယျ။ လုပျကိုငျသမြှ ကွံစညျသမြှ အောငျမွငျထှနျးပေါကျခွငျးကိုဖွဈပျေါစပေါလိမျ့မယျ။ ငှကွေေးကံလဲမွငျ့မားနခြေိနျပါပဲ။ လာဘျရှငျမဲ့ကာလလို့ပဲ ယဘေုယသြုံးသပျရမှာပါ။ရစရာရှိတဲ့ ငှကွေေးတှရေလာပါလိမျ့မယျ။ မှနျးထားသညျထကျငှပေိုဝငျပါလိမျ့မယျ။ ကနျြးမာရေးလဲအညံ့အဆိုးကငျးနပေါလိမျ့မယျ။စနျးပှငျ့နမေဲ့ကာလပါ။မိမိကို purpose လုပျမဲ့သူတှရှေိလာပါလိမျ့မယျ။ အလုပျအကိုငျကတော့ အရမျးအကောငျးကွီးမဟုတျပါဘူး။ခပျပါးပါးပါပဲ။ ပရဟိတအလုပျတှနေဲ့အခြိနျကုနျနရေလိမျ့မယျ။ ပညာရေးထူးခြှနျမှာပါ။ သငျလှယျတတျလှယျပွီး ဉာဏျပှငျ့မဲ့ ကာလမို့ပါပဲ။
ယတွာ ကျောဖီနဲ့ ကိတျမုနျ့ ဘုရားကပျလှူပါ
ဒီကာလအတှငျးခရီးတိုတှေ ခဏခဏသှားရတတျပါတယျ။အဝေးကွီးတော့ မဟုတျပါဘူး။ ဒီကာလအတှငျး စိတျမွနျလကျမွနျလုပျခွငျးကလဲ လမိးကွောငျးမှနျပျေါရောကျသှားတတျပါတယျ။ ငှကေံမညံ့ပါဘူး။ အလုပျကောငျးနတေော့ ငှကေံလဲကောငျးနတေတျပါတယျ။ ကိုယျပိုငျအလုပျမြားအားလုံး ဒီကာလအတှငျး ကောငျးပါလိမျ့မယျ။ ရောငျးပနျးဝယျပနျးတှပှေငျ့လိမျ့မယျ။ လုပျငနျးခြဲ့ထှငျနိုငျပါလိမျ့မယျ။ အခဈြရေးကတော့ အပွငျမှာထကျ onlineပျေါကနေ ခဈြသူတှတေ့တျပါတယျ။ လလှေိုငျးထဲမှာ အဆငျပွမေဲ့ အခဈြရေးပါပဲ။ ကနျြးမာရေးကတော့ အစာမကွတော ရငျပွညျ့တာမြိုးတှလေဲဖွဈတတျပါတယျ။ အစာကွဆေေး ဆောငျထားပါလို့ပွောခငျြပါတယျ။ပညာရေးကံကလဲ စူးစမျးလိုစိတျနဲ့ သိလိုစိတျပွငျးထနျတဲ့ကာလဖွဈတော့ မိမိသာအာရုံစိုကျထားမယျဆို အကောငျးဆုံးပါပဲ
လိုသလောကျမရပမေဲ့ လုပျသလောကျတော့ ရမှာပါ။ ဒီကာလထဲ ကံကွမ်မာကမကျြနှာသာမပေးပါဘူး။မိမိဉာဏျနဲ့ ဝီရိယကိုသာ စိုကျထုတျရပါလျိမျ့မယျ။ မိမိကို မနာလိုသူတှေ ဝနျးရံနတေတျပါတယျ။
မိမိကို ခြောကျခမြဲ့သူတှရှေိနတေတျပါတယျ။ မိမိအနအေထိုငျ အပွောအဆိုဆငျခွငျပါ။ အိမျထောငျသညျဆို အိမျတှငျးရေးသောက ကွုံရနိုငျပါတယျ။
လငျကတဈမြိုး သားကတဈမြိုးဆိုသလိုပေါ့ဗြာ။ ရှငှေလေကျဝတျရတနာမြား အထားမှားပွီး ပြောကျရှတတျပါတယျ။ ရပျဝေးက ဒုက်ခပေးမဲ့သူတှေ အိမျရောကျလာတတျပါတယျ။ ကနျြးမာရေးကတော့ ဒေါငျဒေါငျမွညျပါပဲ။ အညံ့အဆိုးတှမေတှရေ့ပါဘူး။ အခဈြရေးကံကောငျးမှာပါ။ ညံ့နတောက ပညာရေးပါ၊
မိမိကိုယျတိုငျက ပညာရေးအပျေါ စိတျဝငျစားမှုနညျးနတေတျပါတယျ။
ယတွာ ကံ့ကျော ၁၅ညှနျ့ ဘုရားလှူပါ
ဒီကာလက မိမိအတှကျ ကွီးမားတဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြတှခေမြှတျရဖို့ကွုံလာရတတျပါတယျ။ ဆုံးဖွတျခကျြမှားတာနဲ့ နောငျလာမဲ့ အကြိုးဆကျတှမေကောငျးနိုငျပါဘူး။ သူမြားတိုကျတှနျးတာထကျ မိမိမှနျတယျထငျတာကို ရှေးခယျြခွငျးကပိုကောငျးပါတယျ။ ဥပဒနေဲ့ မလှတျကငျးတဲ့ စီးပှားရေးမြား အရေးယူခွငျးခံရပါလိမျ့မယျ။ ရိုးသားပါ ။မိခငျကနျြးမာရေးအထူးဂရုစိုကျပါလို့ မှာခငျြပါတယျ။ ငှကွေေးရငျးနှီးမွုပျနှံမှုတှမှေားတတျပါတယျ။ ကွှေးယူခွငျး ကွှေးတောငျးခွငျးတှမေလုပျပါနဲ့ ။ အလုပျတိုးတတျပမေဲ့ အလုပျခြဲ့ဖို့ ငှလေိုနတေတျပါတယျ။ မိမိကနျြးမာရေးကတော့ ပူပငျစရာမရှိပါဘူး။ မတျတပျဖြား မတျတပျနာလောကျပါပဲ။ ပုံမှနျမဟုတျတာက အခဈြရေးပါ။ မလှတျလပျသူနဲ့ ငွိစှနျးလှယျပါတယျ။ ပညာရေးကတော့ အလှနျကောငျးတယျလို့ ဆိုရမှာပါ။
ယတွာ ဇီးခြိုသီး ၈လုံး ဘုရားကပျလှူပါ
ဒီကာလဟာ လုပျခငျြတာလေးတှေ ကွံစညျထားတာလေးတှအေကောငျအထညျဖျောနိုငျမဲ့ကာလပါပဲ။ အထူးသဖွငျ့အလုပျစီးပှားအထူးတိုးတတျပါလိမျ့မယျ။ နိုငျငံရပျခွားကိစ်စ၊ လူမြိုးခွားဘာသာခွားတှနှေငျ့ဆကျသှယျလုပျကိုငျရသောကိစ်စတှမှော အထူးအကြိုးဖွဈထှနျးပါလိမျ့မယျ။ စကျပစ်စညျးအသဈတှဝေယျလို့ အကောငျးဆုံးကာလပါပဲ။ အောကျလကျငယျသားတှနေဲ့ တိုငျတိုငျပငျပငျ လုပျကိုငျပါ။ ရစရာရှိတဲ့အရာမြား ကွနျ့ကွာနတောမြိုးကွုံရရငျလဲ
ဒီကာလမှာပွနျလညျရရှိလာပါလိမျ့မယျ။ ရပျဝေးကမိတျဆှတှေရေဲ့အကူအညီတှေ လကျဆောငျပစ်စညျးတှရေလာပါလိမျ့မယျ။ ကနျြးမာရေးအနနေဲ့ အအေးမိတာမြိုး ဖွဈရတတျပါတယျ။ရခြေိုးတာခငျြ့ခြိနျတတျဖို့လိုပါတယျ။
ပညာရေးကံကတော့သငျ့ရုံပါပဲ။ အခဈြရေးကံက အခနျ့မသငျ့ရငျ ခဈြသူနဲ့ လမျးခှဲရသညျထိ ညံ့နပေါတယျ။
ယတွာ ဘုရားရှငျအား သံပုရာရညျ ၄ခှကျကပျလှူပါ
အရာရာတိုငျးကို စဉျးစားခငျြ့ခြိနျပွီးမှလုပျပါ။ အလောတကွီးလုပျလအေမှားမြားပွီး နှဈခါပွနျလုပျရလပေါပဲ။ ဒီအပတျထဲ အခွားအခငျြးအရာထကျ ကနျြးမာရေးကိုပိုဂရုစိုကျပါ။ ကနျြးမာရေးဒေါငျဒေါငျမွညျနသေူတောငျမှ ဒီကာလအတှငျးခွူ ခွာလှယျပါတယျ။ ငှကွေေးနဲ့ပကျသကျပွီးတော့ စိတျညဈစရာကွုံလာနိုငျတဲ့အခိုကျအတနျ့ပါပဲ။ ငှကွေေးကို စနဈတကသြုံးစှဲသငျ့တဲ့ကာလပါ။ ဒီကာလမှာ အလုပျနဲ့ပကျသကျ၍ဖွဈစေ၊ အခွားကိစ်စကွောငျ့ဖွဈစေ အပွောငျးအလဲတဈစုံတဈရာမလုပျတာအကောငျးဆုံးပါပဲ။ ပညာရေးကံအညံ့ဆုံးကာလထဲရောကျနပေါတယျ။ ပညာရေးကို စိတျနှဈထားနိုငျမှအဆငျပွပေါလိမျ့မယျ။ အခဈြရေးကိစ်စတှမှော နားလညျမှုတှပွေနျလညျတညျဆောကျနိုငျမှာပါ။ ခဈြသူနှဈဦးလြှောကျမဲ့လမျး ပနျးခငျးသောလမျးဖွဈနမေဲ့အခြိနျပါ။
ယတွာ ဒံပေါကျဆှမျး ဘုရားရှငျအား ကပျလှူပါ၊
(25.1.2018 မှ 31.1.2018 ) ဟောစတမ်း
ကာလရှည်ကြာ ရည်မှန်းချက်မြင့်မားစွာနှင့် ကြိုစားအားထုတ်မှု၏ ကောင်းသောအကျိုးဆက်ကိုရမည်။ ပညာအတတ်ကို အခြေတည်၍ အလို ဆန္ဒရည်ရွယ်ချက်တို့ကို အောင်မြင်အောင် ဆောင်ရွက်ရမည်။ စိတ်ပန်း လူပန်းဖြစ်ပြီးမှ အလိုပြည့်စုံမည်။ ဦးတည်ချက်ပြောင်း၍ လုပ်ကိုင်ခြင်းများ မှ အကျိုးစီးပွား ဖြစ်ထွန်းမည်။ အပြိုင်အဆိုင် အတိုက်အခံများနှင့် ထိပ်တိုက်တွေ့မည်။ အထင်မှားခံရတတ်သည်။ စွပ်စွဲပြောဆိုခံရမည်။
ယတြာ ။ ။ တနင်္ဂနွေနေ့တွင် အောင်သပြေ ဘုရားကပ်လှူပါ။
စိတ်ချမ်းမြေ့စရာများရှိမည်။ ရည်မှန်းချက် အောင်မြင်မည်။ အလှူ မင်္ဂလာကိစ္စများ ပါဝင်ပတ်သက်ရမည်။ မိသားစုနှင့်ပတ်သက်သော အစီ အစဉ်များ ဆောင်ရွက်အဆင်ပြေမည်။ အပြောင်းအရွှေ့အတွက် စီစဉ်သူများ အလိုပြည့်စုံမည်။ ခရီးသွား၍ အကျိုးရှိမည်။ အရပ်ဝေးရောက်ရှိနေသူ များထံမှ သတင်းကောင်း ကြားသိရမည်။ ပညာသင်တန်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်မှုများ အောင်မြင်မည်။ ဘဝလမ်းကြောင်းသစ်သို့ ဦးတည် ပြောင်းလဲခြင်းများ အဆင်ပြေမည်။
ယတြာ ။ ။ တနင်္လာနေ့တွင် ကရေကရာ လှူဒါန်းပါ။
မရောက်ဖူးသော အရပ်ဒေသများသို့ သွားရောက်ရလိမ့်မည်။ လုပ်နေကျ မဟုတ်သောအလုပ်များ လုပ်ကိုင်ရမည်။ အကြီးအကဲများနှင့် ပူးပေါင်း၍ လုပ်ကိုင်သောကိစ္စမှ ထူးခြားသောအပြောင်းအလဲနှင့် တိုးတက်မှုဖြစ် မည်။ ငွေကြေးအပေးအယူကိစ္စ အမှားအယွင်းဖြစ်တတ်သည်။ ပိုင်ဆိုင် သော နေရာသို့ ဝင်ရောက်ကျူးကျော်သူများနှင့် ကြုံမည်။ အလှူအတန်း ကိစ္စများ ပါဝင်ပတ်သက်ရမည်။ လူမျိုးကွဲ၊ လူမျိုးခြားအကျိုးပေးမည်။
ယတြာ ။ ။ အင်္ဂါနေ့တွင် စံပယ်ရနံ့ အနီးအပါးတွင် ထားရှိပါ။
ယှဉ်ပြိုင်လာသူအားလုံးအပေါ် အနိုင်ရရှိမည်။ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်သော ကိစ္စမှန်သမျှ အောင်မြင်မည်။ လက်လွန်ထားသော ငွေကြေးများ ပြန်လည် ရရှိမည်။ အလုပ်အဆင့် တိုးတက်မည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမှ ကောင်းသော အကျိုးစီးပွား ဖြစ်ထွန်းမည်။ ကာလအတန်ကြာ ရပ်တန့်ထားသော လုပ် ငန်းများ ပြန်လည်ဆောင်ရွက်နိုင်မည်။ အရပ်ဝေးနှင့် ဆက်စပ်သော လုပ်ငန်းတို့မှ အဆင့်မြင့် တက်လမ်းများ ဖြစ်ပေါ်မည်။ ကာလရှည်ကြာ ဝေးကွာနေသူများနှင့် ပြန်လည်ဆုံစည်းမည်။
ယတြာ ။ ။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် လက်ဖက်ခြောက် လှူဒါန်းပါ။
မူလစီစဉ်ထားသည်က တစ်မျိုး၊ လက်တွေ့ဖြစ်လာသည်က တစ်မျိုးကြုံမည်။ အလွဲလွဲအချော်ချော်နှင့် အခြေအနေပေးသည့်အပေါ် မှေးထိန်းလုပ်ကိုင်ရမည်။ ဆောင်ရွက်မှုဟောင်းများ တစ်စတစ်စ ရပ်တန့်သွား၍ အသစ်အဆန်းများ ပေါ်ထွန်းမည်။ ကတိပျက်သူများနှင့် တွေ့မည်။ မိသားစုအကြီးအကဲများ ကျန်းမာရေးအညံ့ရှိမည်။ စက်ပစ္စည်းများ အ ပျက်အစီးများမည်။ ပစ္စည်းလှောင်ခြင်း၊ ဈေးကစားခြင်း မပြုရ။ ငွေပေးငွေယူကိစ္စတွင် သတိရှိပါ။
ယတြာ ။ ။ ဗုဒ္ဓဟူးမွန်းလွဲပိုင်းတွင် ရှောက်ယို လှူဒါန်းပါ။
ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်၍ ရှေ့တိုးလုပ်ကိုင်မှုများ အောင်မြင်မည်။ လူမျိုးကွဲ အကျိုးပေးမည်။ အကြံအစည်သစ်များ ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ အခက်အခဲ များ ဖြေရှင်းနိုင်မည်။ နေအိမ်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းများ ကြုံမည်။ အပြိုင်အဆိုင်များကို ကျော်လွှားနိုင်မည်။ ပျိုရွယ်သူများ စန်းပွင့် မည်။ တစ်ဦးထက်ပိုသော မေတ္တာရေးကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ရမည်။ အတွေ့ အကြုံသစ်များရရှိမည်။ မရည်ရွယ်ဘဲ ဘာသာရေးကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ရမည်။
ယတြာ ။ ။ ကြာသပတေးနေ့တွင် ဖရုံစေ့စားပါ။
ကြန့်ကြာနေသောရပိုင်ခွင့်များ ပြန်လည်ရရှိမည်။ အခက်အခဲများ ပြေလည်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်မည်။ တစ်ပြိုင်နက်တည်း တစ်ခုထက် မကသော အလုပ်များလုပ်ရမည်။ ဆိုင်းငံ့ထားသောလုပ်ငန်းများ ပြန်လည် ဆောင်ရွက်နိုင်မည်။ ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲ၍ လုပ်ကိုင်သောကိစ္စတို့မှ ထူးခြား သောအကျိုး ရရှိမည်။ မရည်ရွယ်ဘဲ သွားရောက်သောခရီးမှ ထူးခြားသော အပြောင်းအလဲများနှင့် တိုးတက်မှုများ ရမည်။ ချစ်သူ ခင်သူ၊ ရင်းနှီးသူ များနှင့် စကားများရမည်။
ယတြာ ။ ။ သောကြာနေ့တွင် သောက်ရေခွက်အသစ် အစားထိုးသုံးစွဲပါ။
ဆန္ဒပြည့်မြောက်မည်။ အကြံအောင်မည်။ အလုပ်တိုးတက်မည်။ အခက်အခဲများ ဖြေရှင်းနိုင်မည်။ မိတ်ဆွေကောင်းတွေ့မည်။ အကြီးအကဲ ထံမှ အကူအညီရမည်။ မေတ္တာရေးကံကောင်းမည်။ ၅၂၈-၁၅၀ဝ မေတ္တာ အလုံးစုံ၌ ထူးခြားစွာ အဆင်ပြေမည်။ စုပေါင်းလုပ်ငန်း အကျိုးပေးမည်။ အဆက်အသွယ်ဟောင်းများနှင့် ပြန်လည်ချိတ်ဆက်မိမည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်မည်။ အလုပ်မရှိသူ အလုပ်ရမည်။ ဝန်းကျင်သစ်နှင့် ဆက်ဆံရမည်။ အကြံသစ်များ အကောင်အထည်ဖော်ပါ။
ယတြာ ။ ။ စနေနေ့တွင် နာရီအဟောင်းများ ရှာဖွေစွန့်ပစ်ပါ။
(25.1.2018 မှ 31.1.2018 ) ဟောစတမျး
ကာလရှညျကွာ ရညျမှနျးခကျြမွငျ့မားစှာနှငျ့ ကွိုစားအားထုတျမှု၏ ကောငျးသောအကြိုးဆကျကိုရမညျ။ ပညာအတတျကို အခွတေညျ၍ အလို ဆန်ဒရညျရှယျခကျြတို့ကို အောငျမွငျအောငျ ဆောငျရှကျရမညျ။ စိတျပနျး လူပနျးဖွဈပွီးမှ အလိုပွညျ့စုံမညျ။ ဦးတညျခကျြပွောငျး၍ လုပျကိုငျခွငျးမြား မှ အကြိုးစီးပှား ဖွဈထှနျးမညျ။ အပွိုငျအဆိုငျ အတိုကျအခံမြားနှငျ့ ထိပျတိုကျတှမေ့ညျ။ အထငျမှားခံရတတျသညျ။ စှပျစှဲပွောဆိုခံရမညျ။
ယတွာ ။ ။ တနင်ျဂနှနေတှေ့ငျ အောငျသပွေ ဘုရားကပျလှူပါ။
စိတျခမျြးမွစေ့ရာမြားရှိမညျ။ ရညျမှနျးခကျြ အောငျမွငျမညျ။ အလှူ မင်ျဂလာကိစ်စမြား ပါဝငျပတျသကျရမညျ။ မိသားစုနှငျ့ပတျသကျသော အစီ အစဉျမြား ဆောငျရှကျအဆငျပွမေညျ။ အပွောငျးအရှအေ့တှကျ စီစဉျသူမြား အလိုပွညျ့စုံမညျ။ ခရီးသှား၍ အကြိုးရှိမညျ။ အရပျဝေးရောကျရှိနသေူ မြားထံမှ သတငျးကောငျး ကွားသိရမညျ။ ပညာသငျတနျးနှငျ့ပတျသကျ၍ ဆောငျရှကျမှုမြား အောငျမွငျမညျ။ ဘဝလမျးကွောငျးသဈသို့ ဦးတညျ ပွောငျးလဲခွငျးမြား အဆငျပွမေညျ။
ယတွာ ။ ။ တနင်ျလာနတှေ့ငျ ကရကေရာ လှူဒါနျးပါ။
မရောကျဖူးသော အရပျဒသေမြားသို့ သှားရောကျရလိမျ့မညျ။ လုပျနကြေ မဟုတျသောအလုပျမြား လုပျကိုငျရမညျ။ အကွီးအကဲမြားနှငျ့ ပူးပေါငျး၍ လုပျကိုငျသောကိစ်စမှ ထူးခွားသောအပွောငျးအလဲနှငျ့ တိုးတကျမှုဖွဈ မညျ။ ငှကွေေးအပေးအယူကိစ်စ အမှားအယှငျးဖွဈတတျသညျ။ ပိုငျဆိုငျ သော နရောသို့ ဝငျရောကျကြူးကြျောသူမြားနှငျ့ ကွုံမညျ။ အလှူအတနျး ကိစ်စမြား ပါဝငျပတျသကျရမညျ။ လူမြိုးကှဲ၊ လူမြိုးခွားအကြိုးပေးမညျ။
ယတွာ ။ ။ အင်ျဂါနတှေ့ငျ စံပယျရနံ့ အနီးအပါးတှငျ ထားရှိပါ။
ယှဉျပွိုငျလာသူအားလုံးအပျေါ အနိုငျရရှိမညျ။ ထိပျတိုကျရငျဆိုငျသော ကိစ်စမှနျသမြှ အောငျမွငျမညျ။ လကျလှနျထားသော ငှကွေေးမြား ပွနျလညျ ရရှိမညျ။ အလုပျအဆငျ့ တိုးတကျမညျ။ ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုမြားမှ ကောငျးသော အကြိုးစီးပှား ဖွဈထှနျးမညျ။ ကာလအတနျကွာ ရပျတနျ့ထားသော လုပျ ငနျးမြား ပွနျလညျဆောငျရှကျနိုငျမညျ။ အရပျဝေးနှငျ့ ဆကျစပျသော လုပျငနျးတို့မှ အဆငျ့မွငျ့ တကျလမျးမြား ဖွဈပျေါမညျ။ ကာလရှညျကွာ ဝေးကှာနသေူမြားနှငျ့ ပွနျလညျဆုံစညျးမညျ။
ယတွာ ။ ။ ဗုဒ်ဓဟူးနတှေ့ငျ လကျဖကျခွောကျ လှူဒါနျးပါ။
မူလစီစဉျထားသညျက တဈမြိုး၊ လကျတှဖွေ့ဈလာသညျက တဈမြိုးကွုံမညျ။ အလှဲလှဲအခြျောခြျောနှငျ့ အခွအေနပေေးသညျ့အပျေါ မှေးထိနျးလုပျကိုငျရမညျ။ ဆောငျရှကျမှုဟောငျးမြား တဈစတဈစ ရပျတနျ့သှား၍ အသဈအဆနျးမြား ပျေါထှနျးမညျ။ ကတိပကျြသူမြားနှငျ့ တှမေ့ညျ။ မိသားစုအကွီးအကဲမြား ကနျြးမာရေးအညံ့ရှိမညျ။ စကျပစ်စညျးမြား အ ပကျြအစီးမြားမညျ။ ပစ်စညျးလှောငျခွငျး၊ ဈေးကစားခွငျး မပွုရ။ ငှပေေးငှယေူကိစ်စတှငျ သတိရှိပါ။
ယတွာ ။ ။ ဗုဒ်ဓဟူးမှနျးလှဲပိုငျးတှငျ ရှောကျယို လှူဒါနျးပါ။
ခကျြခငျြးဆုံးဖွတျ၍ ရှတေို့းလုပျကိုငျမှုမြား အောငျမွငျမညျ။ လူမြိုးကှဲ အကြိုးပေးမညျ။ အကွံအစညျသဈမြား ဆောငျရှကျနိုငျသညျ။ အခကျအခဲ မြား ဖွရှေငျးနိုငျမညျ။ နအေိမျပွငျဆငျခွငျး၊ ပွုပွငျပွောငျးလဲခွငျးမြား ကွုံမညျ။ အပွိုငျအဆိုငျမြားကို ကြျောလှားနိုငျမညျ။ ပြိုရှယျသူမြား စနျးပှငျ့ မညျ။ တဈဦးထကျပိုသော မတ်ေတာရေးကိစ်စမြား ဆောငျရှကျရမညျ။ အတှေ့ အကွုံသဈမြားရရှိမညျ။ မရညျရှယျဘဲ ဘာသာရေးကိစ်စမြား ဆောငျရှကျရမညျ။
ယတွာ ။ ။ ကွာသပတေးနတှေ့ငျ ဖရုံစစေ့ားပါ။
ကွနျ့ကွာနသေောရပိုငျခှငျ့မြား ပွနျလညျရရှိမညျ။ အခကျအခဲမြား ပွလေညျအောငျ ဆောငျရှကျနိုငျမညျ။ တဈပွိုငျနကျတညျး တဈခုထကျ မကသော အလုပျမြားလုပျရမညျ။ ဆိုငျးငံ့ထားသောလုပျငနျးမြား ပွနျလညျ ဆောငျရှကျနိုငျမညျ။ ပွငျဆငျပွောငျးလဲ၍ လုပျကိုငျသောကိစ်စတို့မှ ထူးခွား သောအကြိုး ရရှိမညျ။ မရညျရှယျဘဲ သှားရောကျသောခရီးမှ ထူးခွားသော အပွောငျးအလဲမြားနှငျ့ တိုးတကျမှုမြား ရမညျ။ ခဈြသူ ခငျသူ၊ ရငျးနှီးသူ မြားနှငျ့ စကားမြားရမညျ။
ယတွာ ။ ။ သောကွာနတှေ့ငျ သောကျရခှေကျအသဈ အစားထိုးသုံးစှဲပါ။
ဆန်ဒပွညျ့မွောကျမညျ။ အကွံအောငျမညျ။ အလုပျတိုးတကျမညျ။ အခကျအခဲမြား ဖွရှေငျးနိုငျမညျ။ မိတျဆှကေောငျးတှမေ့ညျ။ အကွီးအကဲ ထံမှ အကူအညီရမညျ။ မတ်ေတာရေးကံကောငျးမညျ။ ၅၂၈-၁၅၀ဝ မတ်ေတာ အလုံးစုံ၌ ထူးခွားစှာ အဆငျပွမေညျ။ စုပေါငျးလုပျငနျး အကြိုးပေးမညျ။ အဆကျအသှယျဟောငျးမြားနှငျ့ ပွနျလညျခြိတျဆကျမိမညျ။ ဆုံးဖွတျခကျြမှနျမညျ။ အလုပျမရှိသူ အလုပျရမညျ။ ဝနျးကငျြသဈနှငျ့ ဆကျဆံရမညျ။ အကွံသဈမြား အကောငျအထညျဖျောပါ။
ယတွာ ။ ။ စနနေတှေ့ငျ နာရီအဟောငျးမြား ရှာဖှစှေနျ့ပဈပါ။
ဆရာခိုင်ရဲ့ . ၂၀၁၈ ဇန်န၀ါရီ ၂၄ ရက်မှ ၃၁ ရက်အတွင်း
၂၀၁၈ ဇန်န၀ါရီ ၂၄ ရက်မှ ၃၁ ရက်အတွင်း
ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် သတိပြုရန် ယတြာပြုရန် (၁) ပတ်စာ ဟောစာတမ်း
ဇန်န၀ါရီလ ၂၄ ရက်နေ့မှ ဇန်န၀ါရီလ ၃၁ ရက်နေ့အထိ